CUMFLOW.NET: ခယ်မနှပ်တဲ့ လက်ဖက်(မဟာနန်းပင်တိုင်) စဆုံးရပါပြီ
ခယ်မနှပ်တဲ့ လက်ဖက်(မဟာနန်းပင်တိုင်) စဆုံးရပါပြီ
ပြောရဦးမယ်ဗျ ကျွန်တော့် ခယ်မလေးနဲ့ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းပေါ့ ဆောက်ရှက်မရှိတဲ့ မုဒိမ်းကောင်ဆိုပြီးတော့ ပြောလည်း ပြောကြပါစေတော့ဗျို့ ဖြစ်တဲ့နေရာက မလေးရှားက
ဆောက်ပြသနာပါပဲဗျာ မန်ကျည်းသီးကုလားတွေတောင် တွေ့သွားသေးတယ် တော်သေးတာပေါ့ ဘာမှဝိုင်းမလုပ်ကြလို့ ကျွန်တော်က မိန်းမနဲ့ဗျ ခယ်မလေးက မလေးရှားကိုတက်လာတာ
အလုပ်လုပ်ရမှာလေ။ဘာစက်ရုံဖြစ်ရမှာလဲ အထည်ချုပ်ပေါ့ မြန်မာတွေ ကို ဘယ်သူကများကွန်ပြူတာပေးကိုင်ခိုင်းမှာတုန်း မရှိဘူးတော့ မဟုတ်ဘူး ရှိတယ် ရှားတယ်ပေါ့ဗျာ ။
မိန်းမက မြစ်ကြီးနားက ဆိုတော့ ခယ်မကလည်း မြစ်ကြီးနားကလို့ မထင်ပါနဲ့ သူကတော့ မြေနီကုန်းသူပါ။ကုလားမလည်းမဟုတ်ပါဘူး ဖြူဖြူချောချောပေါ့ သိကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ ရန်ကုန်သူဆိုတော့ စွာပေမပေါ့။မိန်းမက
လည်း ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံထဲကပါပဲ သူကတော့ အိုတီတွေရှိတယ်လေ ပင်ဂျန်းမ်(ချေးငွေ)တွေလည်း ထုတ်ရတယ် ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပေါ့..။ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့လည်းသိပါတယ်၊အဲ့ပင်ဂျမ်းကြီးက တော်တော်ကို စွဲစေတယ်လေ။
တစ်ခြားကိုလည်း ထွက်မသွားချင်တော့ဘူး နောက်ပြီးတော့ ခင်ဗျား က ပိုက်ဆံအမြဲလိုနေတာလေ အိမ်ကိုလည်း မပို့ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ ။အဲ့ ဒါပြသနာပဲပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီနေ့ ချေးငှားတယ် နောက်နေ့ပြန်ဆပ် ဒီလိုနဲ့
ငွေခေါင်းကွဲပြီး အိမ်ကို ပြန်မပို့နိုင်တော့ မလာယုအောရမ်း တို့ အကြိုက်ပေါ့။ကဲ ပြောနေတာနဲ့တိုင်တွေပတ်ကုန်ပြီဗျာ။
ဟုတ်ပြီဗျ။ မိန်းမကတော့ ခယ်မလေးလာတာကို ကြိုက်လည်းကြိုက်တယ် ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးလေ ခယ်မလေးက အရမ်းမိတယ်ဗျ။တုန်တောင် တုန်သွားမယ် မြေနီကုန်းသူတွေထဲမှာ
ခယ်မလေးကို ကျွန်တော် ငမ်းနေတာကို မိန်းမကလည်းသိတယ် ဒါပေမဲ့ ဘာမှတော့ မပြောသေးဘူးလေ .။မိန်းမနဲ့ ပေါင်းလာတဲ့ တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်ဘယ်လောက်သန်သလဲဆိုတာကို မိန်းမလည်းသိတယ်
ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်ဆိုပိုတောင်သိသေးဗျာ…အဟေးဟေးးး ၆လက်မနဲ့ ၄စိတ် ဗျာ
မကြီးပေမဲ့ မသေးပါဘူး တော်ရုံလောက်တော့ အရည်ပျော်သွားနိုင်ပါတယ်။မိန်းမနဲ့ကလည်းနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကြီးတော့ မလိုးနိုင်ပါဘူး ။သူလည်းအလုပ်တွေများတယ်လေ။ တာဘိုလေးကွန်ကစ်ဘာ့ညာ့ပေါ့။ဒီလိုနဲ့ ပဲ
တစ်နှစ်ကျော်လာတာပါ။သူနဲ့ ယူစ က သာ ဆောက်ဖုတ်ကို မှုတ်လိုက် သူကလည်း လီးစုပ်ပေးလိုက်နဲ့ အဆင်ပြေတာလေ နောက်ပိုင်းကျတော့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ရိုးလာတယ်ပဲ ပြောရမလားပဲ သူကတော့
မရိုးလောက်ပါဘူး ကျွန်တော်ကသာ ဘာရူး (အသစ်)လေးစားချင်နေတာဗျ။
ချောင်ကစ်(ဖာတန်းတစ်နေရာ) ကိုလည်းနေ့တိုင်းတော့ မသွားနိုင်ဘူးလေ ကြွက်ကိုက်လိမ့်မယ် ဒီကောင်တွေက ငါးဆယ်လောက်တောင် လူများတဲ့အခါဆိုရင်ပေးမရဘူး ၁၀၀လောက်ပေးမှ ရတာ။စာအုပ်ရှိလည်း
ချောင်ကစ်သွားတာထက်စာရင် KL SENTRAL သွားတာကမှ မိုက်ဦးမယ် အဲ့မှာတော့ စော်တွေက တစ်ပုံကြီးလေ မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်တွေ ၁၀ တိုက်လောက်ရှိတယ် ကြွက်လည်း ရှင်းတယ် နောက်ပြီးတော့
ပိုက်ဆံကလည်း ခင်ဗျား အများကြီးကုန်မသွားဘူး တစ်ယောက်ကို လေးဆယ်လောက်နဲ့စားလို့ရတယ် နောက်ပြီးတော့ ဖထုတ်လည်းရှိတယ်ပြည်မကြီးတစ်ရုပ်လည်း ရှိတယ်ဗျာ။
ပိုကောင်းတာက အင်ဒိုမတွေပဲဗျ အပေးကောင်းတယ်လေ နောက်ပြီးတော့ သူတို့က ပုလွေလည်းပေးတက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားဂျော(ကြော)တော့ နပ်ရမယ်နော် မဟုတ်ဘူးဆိုရင်စော်တွေက ပိုက်ဆံဘတ်တယ်
ကျွန်တော်တောင် တစ်ခါခံဖူးတယ်ဗျ။ဒီလိုလုပ်တာဗျ ခင်ဗျားတို့ကို သင်ပေးဦးမယ် ဟီး….။ အပေါက်စောင့်ရှိတယ်ဗျာ အဲ့ ကို ခင်ဗျားက ပိုက်ဆံလေးဆယ်
ဒါမှမဟုတ်ရင် အပေါစားဆိုရင်တော့ သုံးဆယ်ပေးရမယ်လေ
ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့လိုပေးလို့ ခင်ဗျားပုံကလည်းထူတယ် အ တယ် လို့ ဒီကောင်တွေ သိသွားပြီဆိုရင် ပိုက်ဆံအမ်းတယ်ဗျာ အမ်းတာ ဘယ်လိုအမ်းသလဲဆိုတော့
ပစ်ချ ပစ်လိုက်တာ။ဒါက စော်ကို အချက်ပြလိုက်တာပဲ အဲ့အခါကျရင် ခင်ဗျားက ကောက်လိုက်တယ်ပေါ့ ဒါကို စော်က ကြည့်ထားတယ် ပြီးသွားတာနဲ့ ခင်ဗျားဆီက ပိုက်ဆံကို စော်က ဘတ်ထားလိုက်ကော ခင်ဗျား
စော်ဖိပြီးလို့ ပြီးသွားတဲ့အချိန် ရေချိုးခန်း အိမ်သာကိုသွားတဲ့အချိန်ပေါ့ စော်က ဘတ်ထားလိုက်တာ ခင်ဗျားအဲ့ မှာ ကွိုင်သွားရှာလို့မရဘူး တိုက်ဂေါ(လူမိုက်)တွေရှိတယ်လေ။သူတို့ကိုပိုက်ဆံပေးထားတော့
လက်ခေါက်တစ်ချက်မှုတ်လိုက်တာနဲ့ ခင်ဗျား စုတ်ပြတ်သတ်သွားကောဗျ။ထားဗျာ တစ်ခြားဆီရောက်ကုန်ပြီ။
သိတဲ့ အတိုင်းပါပဲ မလေးရှားကတော့ ရောက်စ လူတွေအတွက် စိတ်လေစရာကြီးပါ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘယ်နေရာကပဲလာလာ လာခဲ့တဲ့ နေရာထက် တိုးတက်နေတာမို့လို့ ဘယ်လောက်ချမ်းသာပြီး ပညာတက်တက်
အနေကျုံ့သွားတာပါပဲ။ဒါကလည်း တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံမို့လို့ ဒီလောက်တော့ ရှိပေလိမ့်မပေါ့ဗျာ။
ရောက်တဲ့နေ့မှာတင် လေဆိပ်မှာစကွိုင်တာဗျ။ကောင်မလေးက ပိုက်ဆံအပိုတွေထည့်လာတာ…။အဲ့ဒါကို မလေးရှား လေဆိပ်မှာတင် ကြွက်တွေကတောင်းလို့ ပေးလိုက်ရတယ်တဲ့ ။သွားကြိုတဲ့ ကျွန်တော်က
“မသိဘူးလေ နွယ်နီက ခုမှ မလေးကိုစရောက်ဖူးတာလေ”
“ပြောတော့လွယ်တယ် မလေးငွေ ငါးဆယ်မဟုတ်လား”
” ဒါဆိုရင် မြန်မာငွေ တစ်သောင်းခွဲလောက်ထွက်သွားပြီ ဒီမှာတစ်နေ့ရှာစာထက်များတယ် ခက်လိုက်တာ ထားလိုက်တော့ဟာ”
အင်း ကောင်မလေးပုံကတော့ ရိုရို ကျိုးကျိုးပါပဲ။မဆိုးဘူး။ဒီလောက်ထိကောင်းသေးတယ်။လေဆိပ်ကအထွက်မှာမကောင်းတော့တာ။ကောင်မလေးဝတ်လာတာက
အစိမ်းရောင် အကွက်နဲ့ ဘောင်းဘီ
နည်းတာကြီးမဟုတ်ဘူးဗျ ။လူကပိန်ပြီး ခါးကသေးနေတော့
သေးမှာပဲ ထင်ထားခဲ့တာ။ဘယ်ဟုတ်ပေမတုန်းဗျာ။အကိတ်ကြီးဟ။ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ငပဲကို အချက်ပြမပြ ကြည့်လိုက်တော့ အလဲ့ သူကောင့်သားက ဗောင်းတော် ညှိမ့် တယ်ဗျာ။ဒီကကောင်ကလည်း
စိတ်တော်သိရပေမပေါ့။စားရပါစေ့မယ်ပေါ့။တိတ်တိတ်လေး ဥထားရမယ်။ဒီကိစ္စက မိန်းမ မသိအောင်ထိုးရမဲ့ ဖဲဗျ။ကျွန်တော် အောင်းထားလိုက်တယ်။
လေဆိပ်ကနေထွက်လာပြီးတော့ တက်စီ ငှားတယ်ဗျ။ကောင်မလေးကတော့ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့။
ကျွန်တော်က ယောင်နန နဲ့ ပြန်ထူးမိတယ်။
“အင်း ဟုတ်တယ်လေ လေဆိပ်နှစ်ခုရှိတယ် တစ်ခုက မီးထွန်းဖို့ တစ်ခုက ကတ်ဆတ်ဖွင့်ဖို့ပေါ့။”
ဆိုပြီး…..ရီတယ်ဗျ။အလဲ့ ကောင်မလေးက သွားတက်လေးနဲ့။
အင်း….ဒီကောင်မလေးကိုမှ မကြိတ်ရဘူးဆိုရင် ငယ်ပါရေ မင်းနဲ့ ငါသေခန်းပြတ်ပဲ။ဒါငါ့ခြံထဲက ကြက်ပဲ။ကြက်တောင်မှ အတောင်စုံတဲ့ ကြက်။ အင်း…အတွေးတွေကတော့ လှပါ့ဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ အိမ်ပြန်ရောက်လာတယ်။မိန်းမကလာကြိုတယ်။မိန်းမကသဘောကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်း သဘောကောင်းတော့ လူချစ်လူခင်လည်းပေါတာပေါ့။
“ဟေးးး ကိုစိုးဦး..ခင်ဗျားကလည်း လူသွားကြိုတာ ကျွန်တော့်တောင်ပြောမသွားဘူး။”
စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ လာပြောတဲ့သူကိုကြည့်လိုက်တော့ ဟိုဘက်ခန်းက ကိုဂျိုး…အင်း…ခက်တော့နေပြီ.ဒီလူပျိုကြီးကတော့…သူ့ဟာသူ
မဖန်ပဲနဲ့ငါ့တိန်ညင်လေးကို ပုဆိုးနဲ့လာအုပ်ချင်နေပြီ.။ကြိုကန်ထားမှရတော့မယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်သိတော့.။
“အေးဗျာ ကျွန်တော်လည်း ခင်ဗျားကို ခေါ်သွားဖို့ ခင်ဗျားအိုတီရှိတယ်ထင်နေတာဗျ။”
သူ့ကြည့်တော့ ကွမ်းစားထားလို့ ရဲနေတဲ့ ရှဲတွေနဲ့ ခယ်မလေးကို လာ ပရီ ချင်သေးတယ်။မဖြစ်ဘူး.ကြိုပွိုင့်လုပ်မှရတော့မယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။
ကရဝိတ်လေး ငါ့အခန်းထဲရောက်နေပါပေါ့လား ။ဘုရား…ဘုရား.။
အင်း ပြောစရာရှိလို့။ဒီမလေးမှာကသိတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ်ဆွေကိုယ်မျိုးမြန်မာတွေက ဆောက်ရမ်းလက်သွက်တာနော်။ချောချော မချောချော ကောင်မလေးတွေတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ သူတို့က လာပြီးတော့
“ကျွန်မက ဒါတွေကို မြန်မာနိုင်ငံမှာကတည်းက စိတ်မဝင်စားတာပါ။ရည်းစားတောင်မထားခဲ့ပါဘူး။”
“မမီး သိပါတယ်။မမီး ဆိုတာက ကျွန်တော့် မိန်းမပါ။”
“ဟ နင်က ယောက်ျားတွေကို စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတော့ မိန်းမတွေကို စိတ်ဝင်စားတာလားဟ။”
“အာာာာာာာာ။ကို စိုးဦးကလည်း ပေါက်ကရပြောတော့မယ်။”
အဲလေ….ငါ့ဂွင်ထဲတော့ ဝင်လာပြီ။စက်ရုံဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့စက်ရုံကနည်းနည်းသန့်တယ်ဗျ။
ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွေလည်းများတယ်။စက်ရုံမှာက မြန်မာတွေနည်းတော့ အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်တယ်လေ။သိတဲ့အတိုင်းပဲ ကိုယ်ရွှေမြန်မာတွေက တစ်ယောက်နဲ့အထက်ဆိုရင် ပြသနာတက်နေကြဆိုတော့လေ။
သီးသန့်နေတက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကတော့ နေရာကောင်းလေးရှာထားပြီးသားပဲ။တစ်လကို ရင်းဂစ် ၂၀၀ပဲ ပေးရတဲ့ အခန်းလေးကိုငှားလိုက်တယ်။ရေဖိုးမီးဖိုးကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပေးရတယ်လေ။
ဒီလောက်ဆိုရင် ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးလည်းအိမ်ကိုပို့နိုင်တယ် ..။ဒီမှာလည်း သုံးစွဲလို့ရတယ်ပေါ့။
လာလေ နွယ်နီ။ကောင်မလေးက ရင်ရှားလေးနဲ့ဗျ။တောက်…လုံးနေမှာပဲ..အတွေးထဲမှာတင် လှိုင်းပုတ်နေပြီ.။လှေမှောက်တော့မှာပဲ။စိတ်ထိန်းထားစမ်းကောင်ကြီး မင်းအစာနော် မင်းစားရမှာ။ကိုယ့်ကိုယ် ကို
ဂျာကြီးဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံက အပေါက်ဆိုးတဲ့ မန်နေဂျာတရုတ်မပါ။ဂျာကြီးဆိုပေမဲ့ အသက်ကြီးကြီးမဟုတ်ဘူး။အသက် ၃၀နီးနီး ဝတုတ်မ အပျိုကြီးဗျ။
စက်ရုံကို ထပ်ရောက်လာတဲ့အထည်တွေကိုဆေးဆိုးဖို့ ဘကုန်းလေးကောင်ကို ခေါ်သွားတဲ့။
စိတ်ထဲကတော့ အင်းဂွင်တော့လွတ်ပြီနဲ့ တူပါတယ် ကျွန်တော်..လေသွားပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဘကုန်းလေးကောင်ကို ခေါ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် အကြံထုတ်နေတာပေါ့ဗျာ။ကောင်မလေး ရေချိုးခန်းကို ချောင်းဖို့ပေါ့။ရေချိုးခန်းနဲ့ အိမ်သာနဲ့က တွဲရပ်ဗျ။ပတ်ပတ်လည်ကို သွပ်တွေနဲ့ ကာထားတာ။ပြီးမှ
ဘေးဘောင်တွေကို သစ်သားနဲ့ ရံထားတော့။အေးရင်လည်း အရမ်းအေးတယ် အပြင်မှာပူပြီဆိုရင်လည်း အရမ်းပူတာလေ။ဒါပေမဲ့ ဘေးမှာက ကုက္ကို ပင်ကြီးရှိတော့ နည်းနည်းခံသာတယ်။
မန်ကျည်းပင်ပေါက်တွေလည်းရှိတယ်။စက်ရုံပတ်ပတ်လည်မှာ အပင်စုံကိုရှိတယ်။ထမင်းဆိုင်ဘေးကနေ ကပ်ဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် အိမ်သာနောက်ဘက် ခြမ်းကိုရောက်တယ်ဗျ။ရေချိုးခန်းနောက်ဘက်ခြမ်းပေါ့။
ဘကုန်းလေးကောင်ကိုကျွန်တော်က လုပ်ပုံလုပ်နည်းနဲ့ ဆေးစိမ်တာတွေကိုပြထားခဲ့ပြီး ကျွန်တော်အသာလစ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ရေချိုးခန်းနောက်ပေါက်ရောက်တော့ မိန်းမနဲ့ ခယ်မနဲ့ စကားပြောနေတာဗျ.
“နွယ်နီ နင့် ကိုပြောစရာရှိသေးတယ်။”
“နင့်ကိုဟိုမှာကတည်းက ဗိုက်ဗာနဲ့ ငါမှာထားပြီးသားနော်။”
ဒီကကောင်တွေက ငဆိုးတွေချည်းပဲ နင်သူတို့ဆီက ဘာမှမရဘူး နင့်လစာပဲ သူတို့အရက်ဖိုးဖြစ်သွားမှာ။”
“အင်းပါ မရီရယ် သမီးသိပါတယ်။”
“အေးပါ။နေတက်ထိုင်တက်တယ်ဆိုတာငါသိပြီးသားပါ။နင်ယောက်ျားမယူသေးဘူးလားဟ။အသက်ပဲ ၂၇ ဖြစ်နေပြီ။”
ကောင်မလေးက ရှက်ပြီးတော့ ရယ်နေတယ်။သူတို့တွေ အလာပ သလာပ တွေပြောနေတုန်းရောက်လာတာက ဂျာကြီး။
ဘုရားရေ ငါတော့ တိုင်ပတ်ပြီ အလုပ်မလုပ်ပဲနဲ့ ဒီရောက်နေတာကိုသိသွားလို့လားမသိဘူး။
တွေးနေတုန်းပဲ ဂျာကြီးက မိန်းမဆီကိုသွားပြီးတော့.။
ကြားသားမိုးကြိုးပါလားဟ။ဒီအပျိုကြီးကျွန်တော်တို့စက်ရုံကို စရောက်ကတည်းက တစ်ခါမှ ဒီအိမ်သာကိုမသုံးဖူးဘူး။ခြေတောင်လာမဆေးဖူးဘူး။ငါတော့ ပျားစွဲပြီနဲ့တူတယ်။
စဉ်းစားရင်းနဲ့ ခယ်မလေးကို မချောင်းခင်မှာ ဒီခါးသေးသေးနဲ့ တရုတ်မကို အရင်ချောင်းရမယ်ပေါ့။အိမ်သာနောက်ဖက်ကနေပြီးတော့သွပ်ပြီးနဲ့ သစ်သားကြားထဲက နေရာလေးမှာ အပေါက်လေးရှိတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်ပဲသိတာ။အဲ့အိမ်သာကို စဆောက်တုန်းက သစ်သားကို အပြင်ကနေသံနဲ့ရိုက်ရင်းနဲ့ သွပ်ကိုထိသွားတဲ့အပေါက်ဗျ။
ဂျာကြီးက အိမ်သာထဲဝင်သွားတော့ ကျွန်တော်လည်း ခြေအသာဖွပြီးတော့အိမ်သာနားကပ်လိုက်တယ်။
အသက်တောင်မရှုရဲဘူး.။မိသွားရင် ခေါင်းပြတ်မှာလေ။ဒီမှာက သူတို့နိုင်ငံသားကိုထိတာနဲ့ ဝိုင်းလုပ်ကြတာ ကျွန်တော်သိတယ်။
ဝါး အသံကျယ်ကြီးကြားရတယ်။ဒီအပျိုကြီးခါးသေးသေးလေးနဲ့ ဆောက်ရမ်းတွေ ညှစ်ထုတ်နေပြီထင်တယ်။
မျက်လုံးကိုကပ်ကြည့်လိုက်တော့ နောက်ကနေမြင်နေရတာဗျ။ဖင်ဖွေးဖွေးကြီး တရုတ်မဖင်ဆိုတော့ ဖွေးတာပေါ့။အဲ့ဖင်ကြားထဲမှာ ဆောက်မွှေးလေးတွေ မည်းနေတာပဲ။လီးက ချက်ချင်းတောင်လာတယ်။
ဒီတရုတ်မ ကဘာဆက်လုပ်ဦးမလဲ စောင့်ကြည့်နေတာ။ ဘယ်ဟုတ်မတုန်းဗျ။
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူး။အလုပ်ချိန်ကြီးထဲမှာ။ရှေ့က သွပ်ပြားအရောင်ပြန်နဲ့ မှန်မှာ
သူ့မျက်နှာကော သူ့ဆောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းကြီးကော မြင်နေရတာ…လီးက ထ်ိန်းမရတော့ဘူး။တစ်ဂွင်းလောက် ကစ်လိုက်ချင်နေပြီ။ခယ်မလေးကို ချောင်းဖို့ ထ်ိန်းထားရသေးတယ်။
တရုတ်မ မျက်နှာက ချွေးတွေပါထွက်လာတယ်။ အား….
ကျစ်ကျစ်….ထိန်းထားရတဲ့ပုံဗျ။အပြင်မှာ ကျွန်တော့်မိန်းမ တို့ ရှိနေလို့ လက်ကို အသာအယာပဲ သွင်းထုတ်နေရတော့
ဆောက်ဖုန်ကိုနှိုက်ရင်းနဲ့ ဆောက်စိကို ချေနေတာဗျ။
ဖွေးစွတ်နေတဲ့ အပြင် အရည်လဲ့နေတာပဲ နီနီရဲရဲ ဆောက်စိလေး…
မကြာပါဘူး။သုတ်ဖြူဖြူတွေ ပန်းထုတ်ပြီး ပြီးသွားတယ်ဗျ။
ရေတွေဘာတွေဆေးပြီးတော့ မတ်တပ်ရပ်လိုက်မှတွေ့ရတယ်။စော်က ခါးမှာလည်း တက်တူးနဲ့ပါလား။မခေဘူးဗျ…။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ တရုတ်မ အပြင်ကိုထွက်သွားပြီးတော့ မိန်းမနဲ့ စကားပြောနေတယ်။
“မာကာဆေး အဒစ်(ကျေးဇူး အငယ်လေး)”
“သာ ပါ့ က(ရပါတယ်မမ)”
“ကဲ တရုတ်မ လစ်သွားပြီ နွယ်နီ နင်ရေချိုးတော့ ဟုတ်ပြီလား.။”
“ငါ ထမင်းသွားချက်လိုက်ဦးမယ်။ “”
ကျွန်တော့်ကို ဦးစားပေးတယ်လေ။.ကိုယ်ကသာ ဆိုးနေတာ။
ဒါနဲ့ ခယ်မလေးက ရေချိုးခန်းဝင်လာတယ်။ခင်ဗျားတို့ ဆိုရင်ကော မျက်တောင်ခတ်မှာလားပြော။ခယ်မဆိုတာမျိုးက တစ်ခြားအသားတွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ တောကောင်သားပါဗျာ။ပစ်တက်ခတ်တက်ရင်
ခယ်မလေးက ရင်လျှားကို ချွတ်လိုက်တယ်ဗျ။အားလားလား။ကောင်မလေးနို့လေးက သေးသေးလေးပါလားဟ။
ခါးကလည်း သေးလိုက်တာ.။ဟိုတရုတ်မ ခါးသေးလှပြီ အောက်မေ့နေတာ သူက ပိုတောင်သေးနေသေးသဟ။.
ပြီးတော့ အောက်ပိုင်းကို ဆက်ကြည့်လိုက်တော့ ဖင်ကလည်း ကောက်ချိတ်ပြီးတော့ ဖောင်းနေတာပဲ။ကျွန်တော်သိတယ်။ဒါအပျိုစစ်စစ် ဖင်ပဲ။လုံးဝရေမရောဘူးဆိုတာကိုလေ။
ဒါနဲ့ ခယ်မလေး ဘာဆက်လုပ်မလဲလို့ ကျွန်တော်ချောင်းနေလိုက်တယ်။ ကောင်မလေးက ရင်လျှားကို ချွတ်ပြီးတော့ သေးအရင်ပေါက်နေတာဗျ။
ဆောက်ဖုတ်လေးကို မြင်ချင်လှပြီ။ဖင်သားကြီးနှစ်ခြမ်းကြားထဲကနေ သေးလေးတွေထွက်နေတာက ဗျာ ..မြစ်ဆုံကိုတောင်သတိရသေးတယ်။ပြီးတော့ ကောင်မလေးက ဆောက်ဖုတ်ကိုဆေးနေတယ်၊
ခယ်မလေးက ရေတစ်ခွက်နှစ်ခွက်လောင်းပြီးတော့ နို့တွေကို ပွတ်နေတာဗျ။ဖင်သားကြီးကလည်း တုန်နေတာပဲ။ဆောက်ရမ်းမိုက်တယ်။နို့သီးလေးကလည်း လှလိုက်တာ။ကွက်တိဗျာ။ဒီအပေါက်ကို ကျေးဇူးတင်ရမယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း ဆက်စောင့်နေလိုက်တယ်။ခယ်မသားလေးစားချင်နေလှပြီဗျာ။
ခယ်မလေးက ဖင်ကြားထဲကိုပါ သူ့လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးတွေနဲ့ ပွတ်နေတာဗျာ။ပြီးတော့ ချေးတွေတွန်းပေါ့။တွန်းမနေပါနဲ့ ခယ်မလေးရယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ငါလျှာနဲ့ လာလျက်ပေးပါ့မယ်။
ခယ်မလေးက ရေမိုးချိုးပြီးသဘက်ကို ယူပြီးသုတ်နေတာ။နတ်သမီးဆင်လေးဗျာ။ဒါနဲ့
ကျွန်တော်လည်း မထိန်းနိုင်ဘူး။ထု ချပစ်လိုက်တယ်။ သွပ်ပြားပေါ်ကို ဆောက်ရမ်းကောင်းလိုက်တာဗျာ။ခါးတွေပါကျင်တက်သွားတယ် နည်းတာမဟုတ်ဘူး။ဆောက်ရမ်းကောင်းသွားပြီ.။ဒီခယ်မလေးကို မရ ရအောင်လိုးဖို့ကိုလည်း ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုအသားမျိုးကို စားဖြစ်အောင်စားရမယ်ပေါ့။
ခယ်မလေး အပြင်ထွက်သွားပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်း ထမင်းဆိုင်ဘက်ကနေပြီးတော့ အလုပ်ဆောင်ဘက်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်၊ခြေဖွပြီးတော့ပေါ့။
အလုပ်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ထမင်းဝိုင်းသွားထိုင်နေလိုက်တယ်လေ။
ခယ်မလေးကတော့ ဘာမှမသိဘူး။အဝတ်လဲနေတယ်။သူ.လည်း ရောက်တာမှတစ်ရက်မပြည့်သေးတော့
မလေးအကြောင်းကို ရှင်းပြရင်းနဲ့ ဆက်တင်ချိန်ဦးမှပဲလို့ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဗျ။
မရီရေ ငါထမင်းစားနှင့်တော့မယ်။နင်မပြီးသေးဘူးမဟုတ်လား။မရီက ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံဘေးမှာ မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်လေ။အဲ့ဒါလေးကလည်း အဆင်ပြေတယ်ဗျ။
“အင်း စားနှင့်လေ ”
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ထမင်းစားခန်းထဲမှာပဲ စောင့်နေတာပေါ့။
ခယ်မလေး အဝတ်လဲတာ မပြီးတော့ဘူးလား မသိဘူးး။ထမင်းစားဖို့ သွားခေါ်ဦးမှပဲ..။
ခယ်မလေးက ကျွန်တော်တို့ လင်မယားခန်းထဲမှာ ထင်တယ်။ကျွန်တော် တံခါးမခေါက်မိဘူး။အရင်လိုပဲ ယောင်ပြီးတော့ တံခါးကို ဆွဲဖွင့်မိလိုက်တယ်။
ခယ်မလေးက ထအော်တယ်။ထမီ မဝတ်ရသေးဘူး။
“ဟာ.။…ဟဲ့ ဘာလို့ တံခါးမပိတ်တာလဲ။”
ပြောရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်မျက်လုံးက သူ့ဆောက်ဖုတ်ဆီကို ရောက်သွားတယ်။
(နောက်မှဆက်ရေးမယ် ဗျာတို့…..အခု စူပါ ဗိုက်ဆာခေါ်နေပြီ.။မနေ့က ဟာတွေကို ပြီးအောင်မတင်လို့တဲ့ ကွန်တိန်နာ နှစ်စီးစာ တရုတ်နှစ်ကူးအတွက် တင်ပေးရမှာ) လစ်ပြီ
” ဆောရီးဟာ ငါမသိဘူး နင်က တံခါးပိတ်ထားမယ်အောက်မေ့နေတာ ”
“တို့လင်မယားက ဒီလိုပဲ တံခါးကို ပိတ်ထားရင် အပြင်ကတစ်ယောက်က”
“လက်ကိုင်ဘုကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့ အထဲက အသံကြားရတော့ အခုလည်း မိန်းမရှိတယ် ထင်ပြီးယောင် ယမ်း
အသံတုန်တုန်လေးနဲ့ ပြောရတော့တာပေါ့။တကယ်တမ်းတော့ ဒဲ့လွှတ်တာ ဒီလိုမျိုးလုပ်မှလည်း
ကောင်မလေးကို ကျော့ဖမ်းလို့ ရမှာကိုး။.။
“သူသိသွားရင် ကျွန်မ ကို ဆူမှာကြောက်လို့။”
” အေးပါဟာ။နင့်အစ်မက အရမ်းဆိုးတာငါသိပါတယ်။ဒီရောက်မှ ပိုပို ဆိုးလာတာ။”
ဖြဲခြောက်ထားရမယ် ဒီကောင်မလေးကို ဒါမှ သူ့အစ်မနဲ့ ကိုင်ပေါက်ပြီးတော့ မြှောက်မြှောက်ပြီး စားလို့ရမှာကိုး။
ယိုးးးးး မြိန်လိုက်တာကွာ ပါကင်ဆောက်ဖုတ်လေးကို ဒဲ့ရှိုးခွင့်ရတာ နည်းတဲ့ဇမဟုတ်ဘူး။အင်း…ငါတော်တော် သန်ပါ့လား။
ဒီတိုင်းဆက်ဒိုးမယ်ဆိုရင် ကောင်မလေးတော့ ကြွေပြီပဲ။လီးကို တပ်လှန့်ထားဦးမှပဲ။စစ်တလင်းမြင်ပြီဆိုတော့ စစ်သွေးတွေကြွနေပြီ သကောင့်သား။
သိပ်တော့မထူးဘူးဗျ။ကြားရက်တွေက ဒီတိုင်းပဲ ကိုတာရာယာကိုလည်း မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး။တစ်ခါတစ်လေ မဟာနန်းမှာ
ဘီယာသွားသောက်နေကြ။အဲ့ဆိုင်မှာက အမြည်းမဆိုးဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ ဆောက်ထားတဲ့ ပုံစံက တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဆေးလိပ်ငွေ့တွေကို မကြိုက်တော့
ခက်သားဗျ။စိတ်ကျဉ်းကျပ်တော့ ရွှေတောင်ကိုပဲ သွားလိုက်တယ်။အဲ့မှာက ဆောက်ရမ်းလန်းတယ်။သီချင်းလေးဘာလေးနဲ့။
စော်လေးဘာလေးငေးရင်းပေါ့ဗျာ။ချောင်ကစ်ကိုလည်း တစ်ခါတစ်လေတော့ ကြားပေါက်လေးတွေရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ တရုပ်မတွေကလည်း
ဈေးကသာ ခေါင်ခိုက်နေတာ။ဆောက်ဖုတ်တွေက လက်တစ်ဖောင်ကျော်ပဲ။မတက်နိုင်ဘူး၊ဒီလိုပဲဝါးနေရတာပဲ။အဲ….ဒါပေမဲ့
တစ်ဂွင်ထပ်မိသေးတယ်ဗျ။အဲ့ဒါက ခယ်မကိုမဟုတ်ဘူးဗျာ။စက်ရုံထဲက ဖထုပ်မ ခပ် ဆိုတဲ့ဆော်လေးဗျာ။ဒီစော်လေးကတော့ ဖထုပ်မ လေးဆိုတော့
အသားဖွေးတယ်လေ။အဲ့စော်လေးက လာလည်တာဗျ။ အိမ်သာ ထဲသေးဝင်ပေါက်တော့လည်းချောင်းတာပေါ့ဗျာ။မလေးရှားမှာကသိတဲ့အတိုင်းပဲ
ဖထုတ်မတွေက လူရည်လည်ပါတယ်။သူများတစ်ထောင်ရရင် သူတို့က တစ်ထောင့်နှစ်ရာအနည်းဆုံးရပါတယ်။ဒါကလည်း သူ့နိုင်ငံက
အစိုးရကောင်းတာရယ်။သူတို့ရဲ့ OFFICIAL LANGUAGE က အင်္ဂလိပ်ဖြစ်နေတာရယ်ကြောင့်ပါ။
ဒီကောင်မလေးက အရက်တွေမူးပြီးရောက်လာတာဗျ။စက်ရုံမှာ ဆူပါဗိုက်ဇာ ဆိုရင်လည်း မမှားဘူးပေါ့။ဖင်ကတော့ ကြည့်ကောင်းတာပြောမနေနဲ့
ဖထုတ်မတွေကြားထဲမှာ တော်တော်ကိုလှတဲ့ဖင်ဗျား။ကျွန်တော်လည်း ဖားသား စားချင်နေတာကြာပြီ။ခက်တာက ဒီစော်တွေက တော်ရုံကို
မကြိုက်ကြဘူးဗျ။ရေကိုကြည့်တယ် နောက်ပြီးတော့ အဖြူကောင်ဆိုရင် ကုန်းတယ်ဗျာ။ဒီတော့ ဒီစော်မူးပြီးဝင်လာတုန်း ဝိုက်ဖို့ကြံတာဗျ။ကျွန်တော်တို့
လင်မယားကလည်း စက်ရုံမှာ လုပ်လာတာ ၁၂ နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့ ခင်နေကြတာပေါ့။ဒီတော့လည်း အားလုံးကို ယုံကြည်စွာပဲ
လာလည်တက်ကြတယ်။အဲ့လိုလာလည်ပြီးတော့ သေးပေါက်သွားကြတာကို ကျွန်တော်က မခံနိုင်လွန်းလို့ သူတို့ တကယ်ကော
သေးပေါက်ကြရဲ့လား။အ်ိမ်သာခွက်ထဲကော ဝင်အောင်ပေါက်ကြရဲ့လားစိတ်ပူတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင်းသွားသွား ချောင်းပေးရတယ်။ဒီတစ်ခါတော့
နေဦးဗျာ ခင်ဗျားတို့ကို ရှင်းပြရဦးမယ်။ကျွန်တော့်အ်ိမ် ပုံစံအကြောင်းကို။မလေးရှားမှာ အိမ်ဆိုတာကလည်း သူများဆီက ငှားထားတဲ့အိမ်ပေါ့ဗျာ။
သိပြီးသားပဲ။ကိုယ်တိုင်လည်းမဝယ်နိုင်ဘူးလေ။အိမ်တစ်လုံးကို မြို့ထဲမှာဆိုရင် မလေးငွေ ဆယ်သိန်းအထက်ပေါက်တယ်။တစ်ဖလတ်ထဲဆိုရင်တော့
နှစ်သိန်းလောက်ဆိုရပါတယ်။မြန်မာငွေဆိုရင် သိန်းခြောက်ရာလောက်ပေါ့ဗျာ။ထားပါလေ။အိမ်အကြောင်းရှင်းပြမယ်။စက်ရုံ ဘေးကနေဝင်တဲ့
အပေါက်ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ကနေလာမယ်ဆိုရင် မန်ကျည်းပင်ရယ် သရက်ပင်ရယ်ရှိတယ်ဗျ။အဲ့နှစ်ပင်လုံးကို အိမ်ပေါ်ကို အရိပ်မိုးပေးထားသလိုဖြစ်နေတာ
အိမ်ညာဘက်ခြမ်းမှာက ကန်စွန်းခင်း ချဉ်ပေါင်ခင်းနဲ့ စံပါယ်ရုံဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ အ်ိမ်လေးက အေးလည်းအေးတယ်။မွှေးလည်းမွှေးတယ်လေ။
သူများတွေလာလည်ကြတယ်လေ။တစ်ချုိ့ကတော့ အရက်ဝိုင်းလေးတည်တာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်လည်း သောက်တက်စားတက်တော့
နည်းနည်းဝင်ကစ်တာပေါ့။ဘီယာလောက်ပါပဲ။တစ်ချို့ကောင်တွေကျတော့လည်း ၃ တွေလာကစ်တယ်ဗျာ။ပါးစပ်ထဲကို အကြွေစိလေည်း
ထည့်ပြီးတော့ ဆေးလိပ် ငွေပြားပေါ်ကို အဖြူမှုန့်တွေတင်ပြီးတော့ မီးရှို့တယ်လေ။ပြီးသွားရင် အဲ့အငွေ့တွေကို ပါးစပ်ကနေရှုတာပေါ့။
ဒီကောင်တွေလာတိုင်းကျွန်တော့်အတွက် ဟင်းပါလာတယ်လေဗျာ၊အရက်သမားတွေပဲ နေရာရွေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကောင်တွေလည်းရွေးတာပဲ။
တစ်ခါတစ်လေ လေတိုက်ရင် ကာတောင်ကာပေးရသေးတယ်။ဒီကောင်တွေက ကျွန်တော့်အိမ်လေးမှာ ဘိ လုပ်နေကြတာပေါ့ဗျာ။
အရက်သမားတွေကတော့ ကိုယ်နဲ့ သိတဲ့ ကောင်တွေကိုပဲ ထားတယ်။မဟုတ်ရင် ဒီကောင်တွေက မိန်းမကို မြည်းချင်နေကြတာ။မဖြစ်ပါဘူး။
ဖထုတ်မလေးက အာလေးလျှာလေးနဲ့ လှမ်းအော်တယ်ဗျ။
“စိုး…..”(စိုးဆိုတာက ကျွန်တော့်ကို စက်ရုံကခေါ်တဲ့နာမည်ဗျ)
ဘာလဲလို့ပြောတာ။ပေါက်ကရတွေဗျာ။အီးလို လာပြောနေတာ နားပါပူတယ်။
ကျွန်တော်က အီးလို သိပ်မရတော့နားလည်းမလည်ပါဘူး။
ကျွန်တော်သိလိုက်တာက သူဖန်ရှင်ကနေပြန်လာတာတဲ့ ပါတီပေါ့ဗျာ။
STUFF PARTY ပေါ့ အဲ့မှာသောက်ပြီး မူးလာတာတဲ့။အင်းလို့ အဲ့ဒါဆို ဝင်အိပ်နေလေဆိုတော့ စော်ကပါးတယ်ဗျ။လှမ်းမေးတယ်။
“ရီ မာနား ( ရီဘယ်မှာလဲတဲ့)”
“အဒါ့ ဒီ ဒါလမ်း( အထဲမှာရှိပါတယ်။)”
လို့ပြောလိုက်တယ်။ဖထုတ်မက အလည်ဗျာ။ကျွန်တော်တွဲတာကို တောငံဘူး။သူ့ဟာသူထသွားတယ်။ဘယ်ကောင်တွေ
ဘယ်လိုဆိုတာသိနေသလားပဲ။ဒီစော်က တစ်ခြားဖထုပ်မတွေနဲ့ ကွာတာက နည်းနည်းစည်းကမ်းကြီးတယ်။တစ်ခြားဖားမ တွေလို မကလက်ဘူး။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ မိကောင်းဖခင် သားသမီးပေါ့ဗျာ။ အေးလေ..ဒါကြောင့်လည်း ဒီကောင်ကြီးက ဝိုက်ချင်နေရတာပေါ့။….အဟီးးးးးးး။ဂလိုဗျ၊။
ဖထုပ်မ က အထဲကို ယိမ်းထိုးပြီးဝင်သွားတယ်ဗျ။တစ်ကိုယ်လုံးလည်းနံနေတာပဲ.။ဆေးလိပ်စော်တွေကော ရှန်ပိန်စော်တွေကော။ကြည့်ရတာ သူဌေးနဲ့
လိုက်သွားတာထင်တယ်။ဆောက်သူဌေးက ငါတို့လို နှစ်ပေါင်းဆယ်နဲ့ ချီလုပ်ပေးတဲ့ကောင်တွေဆိုရင် တစ်ပြားမှ မလာဘူး။ဆောက်လုပ်မလုပ်တဲ့
ဟာတွေကိုပဲ ငဝိုင်းတွေ ချ နေတယ်။ကျွန်တော်ပေါက်တာ ဒါတွေလည်းပါတယ်။ထားပါဗျာ။ဖထုပ်မကို ဝိုက်ခဲ့တဲ့ အကြာင်းဆက်ပြောမယ်။
ဖထုတ်မ က ကျွန်တော်တို့အခန်းဘေးက လက်ကိုင်ပါတဲ့ ခုံစိမ်းကြီးပေါ်မှာ တက်လှဲနေတာဗျ။ကျွန်တော်လည်း မသိမသာလေး မေးရတယ်။မိန်းမက
ဈေးကိုသွားတယ်။ခယ်မက အိုတီဆင်းနေရတာ ညနေ ၇ ခွဲမှ ပြန်လာမှာဆိုတော့။
“ခပ် ခပ် မာစို့လား။(အထဲဝင်လေခပ်)”
သူဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူးဗျာ။ဝတ်ထားတာက သူအမြဲ ဝတ်နေကျ စကပ်ဒူးဖုံးလေးဆိုတော့။အကဲစမ်းပြီး ဒူးခေါင်းကို မသိမသာ ထိကြည့်တယ်။လုံးဝ
မနိုးဘူး။သေချာတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ အေးဆေးသွားပြီ။ဖြည်းဖြည်းချင်းလှန်ပြီးတော့ ပေါင်ရင်းကိုကြည့်လိုက်တာပေါ့။အားပါး။စော်က အနီရောင်
အတွင်းခံလေးနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်လည်း ဒီစော်ကို ကျိတ်ချင်နေတာကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ သိပ်မရဲသေးတော့ ဆောက်ဖုတ်ကို မသိမသာထိကြည့်
တစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုတော့ ပြန်ရေးပြနေရတာနဲ့တင်ကို ရင်တွေ ဗြောင်းဆန်ပါတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ခုံကိုနည်းနည်းတွန်းပြီးတော့ ဘေးကနေ ကပ်ထိုင်ပြီး ဆောက်ဖုတ်ကို နှိုက်နေတာပေါ့.။သတိတော့ထားရတယ်။
အရည်ရွှဲလာပြီဆိုရင်တော့ စော်နိုးနေပြီဆိုတာကို။ဒါပေမဲ့ စော်ကမနိုးတော့ သူ့နို့ကို အပြင်ကနေ ဖွဖွလေးညှစ်တယ်။ပြီးတော့ နို့သီးလေးကို
မသိမသာလေး စုပ်တယ်။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။လုံးဝကိုမတွဲသေးဘူး။ပါကင်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်တောင်မှ အခါနှစ်ဆယ်မကျော်သေးတဲ့ နို့သီးနဲ့
ဆောက်ဖုတ်ဆိုတာကို သေချာပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ ပေါင်ကိုကားရင်းနဲ့ နိုးလာမလားဆိုတာကိုလည်း ကြည့်ရသေးတယ်။ကွက်တိပဲဗျာ။tool box
ထဲမှာ မိန်းမ မီးနီရင် ဘန်ကာနဲ့ ဖြတ်မောင်းရအောင်ဆိုပြီး ဝယ်ထားတဲ့ ကွန်တွေရှိတယ်။ကွန်အုပ်ပြီးဝိုက်မှဖြစ်မယ်။
ဒါနဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို ကွန်စွပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ စော်စောက်ဖုတ်ကို ဝင်သလောက်ထည့်ရတာပေါ့ဗျာ။ဖြည်းဖြည်းချင်းစွပ်နေတာ။
အချက်သုံးဆယ်ကျော်လောက်တောင်မခံနိုင်ဘူးဗျာ။ပစ္စည်းက ကျပ်ပြီးနွေးနေတာ။နောက်ပြီးတော့လည်း ကိုယ့်ဆူပါဗိုက်ဆာကို
ကိုယ်ပြန်ကြိတ်နေရတာဆိုတော့ မခံနိုင်တော့ဘူး။ပြီးသွားတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ကွန်စွပ်ရက်ကြီးနဲ့ပဲ အထဲမှာပြီးတယ်။
သူပူပြီးနိုးမလာဘူးဆိုတာကို သေချာသိတယ်လေ။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ခင်ဗျားတို့ ဆွေမျိုးမေ့သွားတယ်ဆိုတဲ့ စကားကို အဲ့ဒီဟာနဲ့ နှိုင်းပြီးတော့ကို
အဲ့ဒီမှာဆောက်ပြသနာတက်တာက။ဘေးခန်းက ကို ဂျိုးဝင်လာတာပဲ။လီးက ကွန်ကို ချွတ်နေတုန်း ဝင်လာတာ။ဖားမ ကလည်း စောက်ဖုတ်လန်ကြီးနဲ့၊
ကျွန်တော်လက်ကို ပိတ်ပြလိုက်တယ်။တိုးတိုးနေပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဒီဘဲကြီးကလုံတယ်။ကျွန်တော် မိန်းမ မသိအောင် ဘိသွားရင်လည်း သူပါလိုက်ဖိတယ်။ဒါပေမဲ့ သူက မှင်…။
အေးဆေးပဲ။သူက မျက်လုံးပြူးပြီး ကျွန်တော့်ဇကို ခိုက်နေတယ်။
“စိုးဦး ငါလည်း ဝိုက်မယ်ကွာ။”
တကယ်ဆိုရင် မကျွေးချင်ဘူးဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ဒါပေမဲ့ မဖြစ်ဘူး။မကျွေးရင် အရင်က ကျူးခဲ့တာတွေကိုပဲ ဒီဘဲကြီးက အော်တော့မှာသိတယ်။ဒါနဲ့ ခေါင်းငြှိ်မ့်ပြလိုက်တယ်။ဘောက်စ်ထဲက ကွန်နှစ်ခုကျန်တာထဲက တစ်ခုပေးလိုက်တယ်။
“စော်က မူးနေတာ။သိပ်မသွင်းနဲ့ ကွိုင်တက်ရင် ကပလားဆာကစ်နော်(ခေါင်းကွဲသွားမယ်နော်)”
” အေးပါကွာ ငါပေါက်ပါတယ်။နေ့လည်က ကတည်းက ဒီစော် သူဌေးနဲ့ လိုက်သွားတာ ငါတွေ့သားပဲ”
ခဏသာပြောနေတာ လက်က ဖထုပ်မ ဖင်ကို ညှစ်နေပြီ။ဒီဘဲက အညာသား ကွမ်းဂျိုးကြီးနဲ့ ရီပြနေတာစိတ်လေစရာကောင်းလို့ အပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။
ချောင်းကြည့်ချင်တာနဲ့ ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ ဆောက်ဖုတ်ကို နမ်းနေသေးသဗျာ။ကျွန်တော်များလုပ်သွားသေးသလားလို့ သိချင်နေတာနေမယ်။မဟုတ်ဘူးဗျာ စော်အပေါက်ကို သေချာကြည့်နေတာ။ဘဲကြီးကလည်းခိုးလိုးပါတယ်ဆိုမှ ကင်ညာစစ်နေတယ်။ပြီးတော့ ဘဲကြီးက ကွန်စွပ်ပြီးတော့ နို့သီးကို ချေလိုက် ဆောက်ဖုတ်မွှေးတွေဆွလိုက် သူ့လီးကြီးထိုးထည့်လိုက်နဲ့ ခဏပါပဲ ပြီးသွားတာ။ပစ္စည်းက ၄လက်မခွဲလောက်နဲ့ ဒီစော် နိုးနေရင်တောင် သိမှာမဟုတ်ဘူး သူ့ကိုလိုးနေမှန်းလေ။အဲ့လောက်ချာတာ။ဒါပေမဲ့ မွေးရာပါဆိုတော့လည်း မနောက်တော့ပါဘူး။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်အထဲပြန်ဝင်လာပြီးတော့ သူ့ဆောက်ဖုတ်မှာပေနေတဲ့ ကွန်က ချောဆီတွေကို အကုန်သုတ်ပေးရတာပေ့ါ။နေသားတစ်ကျ ပြန်ထားပေးလိုက်တယ်။
အပြင်မှာစောင့်နေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါနဲ့ မိန်းမကို ဖုန်းဆက်ရတယ်။
“မိန်းမရေ အိမ်မှာ ဘာဟင်းချက်တုန်း။”
” အေး အေး တို့စရာလေးလည်းလုပ်ထားနော်။”
ရပြီ၊ဒီလောက်ဆိုရင် ဖားမ လည်း အနိုး မိန်းမလည်း အိမ်ပြန်ရောက်ဆိုရင် ဖားမ မသိလောက်တော့ဘူး။နောက်နေ့တွေ့သားပဲ။ဖားမ ပုံမှန်ပဲ။နောက်မှ သိတယ် ဘယ်ဟုတ်မလဲ ။သူဌေးက ဖားမကို ကင်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်ဒီစော်ကို ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ဝိုင်းကြိတ်တာကိုရောသွားပြီးတော့ သူမသိတော့တာ။ဒါလည်းအိုကေတာပဲလေ။
နောက်နေ့တွေမှာကျွန်တော်နဲ့ ကိုဂျိုးကြီး နှစ်ယောက် မိုင်ဒင်းကို သွားကြသေးတယ်ဗျ။အဲ့မှာလည်း ဇတ်လမ်းတစ်ခုဆက်ဖြစ်သေးတယ်။
တရုတ်မဗျ…သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က တစ်ခုံကျော်မှာကျတာ။စော်လေးက ငယ်ငယ်လေးရယ်။အသက် ၁၂ နှစ်လောက်ပဲ ရှိဦးမယ်။ကျွန်တော်နဲ့
ကိုဂျိုးကပ်ရပ်ထိုင်ခုံမှာဗျ။သူအဘိုးလားတော့မသိဘူး။အသက်ကြီးကြီးတစ်ယောက်လည်း သူ့ဟိုဘက်ဘေးမှာထိုင်နေတယ်။အဘိုးကြီးက ကားနံရံနဲ့
ကပ်ထိုင်နေတာဆိုတော့ ကောင်မလေးက ကျွန်တော်တို့ ထိုင်ခုံနဲ့ ကပ်ရပ် ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်နဲ့ကပ်ရပ်ပေါ့ဗျာ။
ကိုဂျိုးကြီးက အိပ်နေတာလေ။ကျွန်တော်က ကောင်မလေးကို ကြည့်တော့ သူက မအူမလည်နဲ့ ပြန်ကြည့်တယ်။ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ။ဒါပြည်မကြီး
တရုတ်မပဲ ဆိုတာ…။ပြည်မကြီးတရုတ်မတွေက ဒီကိုလာလည်ကြတယ်။တစ်ချို့ကတော့ မလေးတရုတ်တွေရဲ့ အငယ်အဖြစ်ပေါ့ တစ်ချို့ကတော့
အတည်တကျယူပြီးတော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေတဲ့ ဒီမှာနေဖို့။တစ်ချို့ကတော့လည်း ဒီမှာ ချာရီမာကန်း(ရှာဖွေစားသောက်)ပေါ့ဗျာ။
ဆက်ရဦးမယ်။ကောင်မလေးက မအုမလည်လေးဆိုတော့ ကြည့်ရတာပြည်မကြီးသူလေးပဲ.။ကျောင်းသူအရွယ်လေးဆိုတော့
ဒီကကောင်ကလည်းဖန်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အကြံရသွားတယ်။နိုင်ငံခြားကားတွေထဲမှာလေ FLASH ဆိုတဲ့ ကာမအကြည့်တွေ
ထောင်ဖမ်းတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေလေ.။ကျွန်တော်သိပြီ။ဒါနဲ့ ဘေးကိုကြည့်လိုက်တော့ ဟိုက်ဝေးကားကြီးပေါ်မှာ ဘေးခုံတွေက လူတွေမတက်သေးဘူး
ကိုဂျိုးကြီးလည်း မနိုးသေးတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း မသိမသာလေး ဘောင်းဘီကို လက်နှိုက်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ ဖုန်းကင်မရာကို
ကျွန်တော့်ရှေ့က အမှိုက်တွေ ဂျာနယ်တွေထည့်တဲ့ ဇကာပါတဲ့ အိပ်အနက်လေးထဲကိုထည့်လိုက်တယ်။ဗီဒီယိုရိုက်ထားတယ်။
ကောင်မလေးတည့်တည့်ကိုပေါ့။ပြီးတော့ ပြန်ကြည့်ကြည့်တယ်။မဆိုးဘူး သူ့ဘေးဘက်ဆံပင်နဲ့ ပုခုံးမပါတာက လွဲရင် အားလုံးအဆင်ပြေတယ်။
ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်း ကျော့ကွင်းဆင်ရတော့တာပေါ့။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတည်းက ကျွန်တော်က ဒီလိုမျိုးနဲ့ စော်အပျိုတွေချည်းပဲ ဝိုက်ခဲ့တာ
လေးယောက်တောင် အဲ့ထဲမှာ တစ်ယောက်ကိုပဲ မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တာ။ကျန်တဲ့စော်တွေက အေးဆေးပဲ လိုးခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ထားပါလေ နောက်ပိုင်းမှာ
အခု ဒီတရုတ်မလေးက ကျွန်တော့်ကိုမကြည့်သေးဘူးဗျ။ tv ကြည့်နေတယ်။tv3 ပါ။အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကိုယ့် ငပဲ ထတဲ့အချိန်
နောက်ပြီးတော့ ကောင်မလေးကြည့်လောက်မဲ့ အချိန်ကို မှန်းကြည့်ရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် note2လေးက မာမိုရီ သိပ်မကျန်တော့ဘူး
maharnan.com က ပရီမီယမ် ဟုန်းမိတ်ကားတွေထည့်ထားလို့။ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း အချိန်ကို လုပြီးတော့ စော်လေးကို ကြည့်လိုက်တယ်။
ကောင်မလေးက ပြည်မကြီးသူဆိုတာသေချာတဲ့ အပြင် ငတုံးလေးဗျ။ရှေ့ ခုံက မှန်ကာတဲ့လိုက်ကာ အကောင်းစားလေးကို
အဆန်းလုပ်ပြီးကြည့်နေတယ်။ဟုတ်တယ်လေသူတို့ တရုတ်ပြည်မကြီးမှာ ဒီလိုဟာတွေမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ ကားကလည်းသန့်တယ်ဆိုတော့
ကောင်မလေးက သဘောကျနေတာပေါ့။ကျွန်တော်က ကျွန်တော့် ငပဲကို ဆွရင်းနဲ့ ဘယ်ဘက်မျက်လုံးထောင့်ကနေပြီးတော့ ကောင်မလေးကို
ကြည့်နေတာ။ကောင်မလေးတွေ့သွားတယ်ဗျ။မတွေ့ပဲနေမလား။ကျွန်တော်ဝတ်ထားတာက JEAN ဘောင်းဘီဆိုပေမဲ့ အပွကြီးနောက်ပြီးတော့
ဘောင်းဘီဇစ်ကိုလည်း အပြည်ွှ့ချွတ်ထားပြီး ကျွန်တော့် ဟာကြီးကို အမုန်းဖြည်ချထားတာ။ကောင်မလေးက ငေးရင်းကြောင်ကြည့်နေတယ်။အဲ့လို
မျက်လုံးထောင့်စွန်းကနေပြီးတော့ ဘေးဘက်ကိုကြည့်တက်ဖို့ ကျွန်တော်လေ့ကျင့်စရာမလိုခဲ့ပါဘူး။ငယ်ငယ်ကတည်းက တက်ခဲ့တာဗျ။အဲ့ဒါနဲ့
ကျွန်တော်လည်း ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ကောင်မလေးက ဖီးတွေလာနေတာဗျ။ဒါပေမဲ့ဖီးလ်ထက်စာရင် တုန်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။
သိတော့သိတယ်ဗျာ။မကြုံဖူးသေးတဲ့ လီးကို မထင်ထားတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့တွေ့ရတာဆိုတော့ ကောင်မလေး ကောင်းနေတာပေါ့။
သူ့ကိုကျွန်တော်မကြည့်ပဲ ငပဲကို ပြီးသွားတဲ့အထိ ထုပစ်လိုက်တယ်။အရည်တွေထွက်ကုန်တော့ ကောင်မလေးလည်း ငြိမ်သွားတာပေါ့။သူကြောင်ပြီး
အဲ့ အရည်တွေကိုကြည့်နေတုန်း ရှေ့ အမှိုက်အိပ်ထဲက ဖုန်းကို ဇတ်ခနဲ ကောက်လိုက်ပြီးတော့ လီးကို ချိန်ပြီး ငါးစက္ကန့်လောက်ရိုက်လိုက်တယ်။
ကောင်မလေးသိသွားပြီ။ကြောက်ပြီး ကျွန်တော့်ကိုကြည့်နေတယ်။ဘေးမှာ ဘယ်ခုံမှ မရှိတာ ဆောက်ရမ်းကောင်းလွန်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း
အရည်တွေကို တစ်ရှူးနဲ့ သုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ ဗီဒီယိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်သေးတယ်။ကောင်မလေးမျက်နှာထားကို အဲ့မှပဲ လုံးဝ
လင်းနေအောင်မြင်ရတယ်ဗျာ။ကောင်းလိုက်တာ ကောင်မလေး မျက်လုံးကို ပြူးနေတာပဲ။ဂွင်တော့ စပြီဆိုတာကို သိလိုက်တယ်။ကောင်မလေးကို
ကြည့်တော့ သူက ခေါင်းငုံ့ထားတယ်ဗျ။ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော်က ဖုန်းကို သူ့ဘက်လှည့်ပြလိုက်တယ်။သူ့မျက်နှာကြီးတော်တော်ကို နီနေတာဗျ.။
အပျိုတောင်ဖြစ်သေးရဲ့လားမသိ။ငယ်ငယ်လေးဆိုတော့လည်း ရှက်နေရှာမှာပေါ့။ကျွန်တော်က ဇတ်ခနဲ့ သူ့နို့သေးသေးလေးကို ဘယ်ဘက်လက်နဲ့
ညှစ်ထည့်လိုက်တယ်။အားတော့ မပါဘူးပေါ့။ကောင်မလေးလန့်သွားတယ်။ကျွန်တော်က ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ ပိတ်တဲ့ ပုံလုပ်ပြီးတော့ ဖုန်းကို
ထောင်ပြလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ဖွလိုက်မယ်ပေါ့။သူမျက်လုံးလေးက ဝိုင်းပြီးတော့လည်နေတာဗျ။အဲ့ဒါနဲ့ နို့ကို ခုံကျော်ပြီးတော့ နှိုက်ရတာ။ကားဆရာ
မြင်သွားမှာလည်း ကြောက်ရတော့ သူ့ကို ရှေ့ကလွတ်နေတဲ့ ထိုင်ခုံကို မေးဆတ်ပြလိုက်ပြီး ဒီမှာထိုင်ပေါ့။မျက်နှာထားတင်းတင်းနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ ကောင်မလေးလည်း ကြောက်ကြောက်နဲ့လာထိုင်တယ်။စကပ်လေးကို ခုမှကြည့်မိတယ်။စကပ် အဖြူလေးကို ဇာပန်းရောင်လေး
ဖောက်ထားတာ။ဖင်လေးကတော့ သိပ်မတင်းသေးဘူး။ဒါအပျိုပေါက်ဖင်ဆိုတာကိုသိလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ ကောင်မလေးလည်း
ကျွန်တော်က ညာဘက်လက်နဲ့ ရှေ့က နှစ်ခုံကြားထဲက အပေါက်ကို လက်နှိုက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ သူ့ညာဘက်နို့အုံလေးကို ညှစ်လိုက်တယ်။
ကောင်းလိုက်တာဗျ။နုနေတာပဲ ကောင်မလေးလည်း သက်ပြင်းချပြီးငြိမ်နေတယ်။သိတယ်။ကောင်မလေးလည်း ထိနေပြီ.သူ့ကို ပထမဆုံးနို့ညှစ်ဖူးတဲ့
သူက ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။ဖီးလ်တွေ အရမ်းကို တက်နေတာဗျာ။ရေးရင်းနဲ့ ဒီကောင်မလေးမျက်နှာကို မြင်ယောင်လာပြီးကောင်းချင်လာပြီ။ဒါနဲ့
ကောင်မလေးပေါင်ဆီကို လက်က ရောက်သွားတယ်၊ကောင်မလေး လက်တွန့်သွားတယ် တုန်သွားတယ်ဗျ။ပေါင်လေးတုန်သွားတာ ဇတ်ခနဲပဲ
ရင်ခုန်စရာတောင်ကောင်းသေး.ဒါနဲ့ ကျွန်တော် လက်ကပေါင်ကြားကနေ သူ့ဆောက်ဖုတ်ခုံးလေးကို ရသလောက်ကိုင်ကြည့်တယ်ဗျာ။တင်းပြီးတော့
ဖောင်းနေတာပဲ။ဒါနဲ့ ကောင်မလေး ဆောက်ဖုတ်ကို ပါ နှိုက်ဖို့ ကြံမိတယ်။ကောင်မလေး ပေါင်ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး ဖြဲလိုက်တယ်။ကောင်မလေး
မအော်ရဲဘူးဆိုတာကိုသိတယ်ဗျ။ဒီလိုဗီဒီယို ကို အသက်ရနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ခြိမ်းခြောက်ဖို့ အသုံးမပြုနိုင်ဘူးဆိုတာကိုသိတယ်။
ဒီကောင်မလေးက ငယ်ပြီးတော့ ဘေးမှာလည်း အဖော်မပါလာတော့ ကျွန်တော့် အကြိုက်ပေါ့။ဒါနဲ့ ကောင်မလေး ပေါင်နည်းနည်းပြဲသွားတယ်ဗျ။
လက်က သူ့စကပ်အရင်းကနေပြီးတော့ လက်ဝင်လျှိုပြီးတော့ နှိုက်လိုက်တယ်။ကောင်းလိုက်တာ။ဆောက်ရေလေးရွှဲပြီးတော့ ပူနေတာပဲ ။
ကောင်မလေး ဆောက်ရေရွှဲနေတာကို ကောင်မလေးလည်း သိတာပေါ့။ဒီတော့ ကျွန်တော့်လက်ကို နှိုက်သွင်းလေးလုပ်လိုက်တာ
အခါသုံးဆယ်တောင်မရှိဘူး သူ့ပေါင်နှစ်ဖက်နဲ့ ကျွန်တော့်လက်ချောင်းတွေကို ညှစ်လိုက်တယ် တစ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ပေါ့။ကျွန်တော်သိလိုက်တယ်။
ကောင်မလေး ပြီးသွားပြီလို့။အဲ့ဒါနဲ့ ကောင်မလေးကို သူမှိန်းလို့ပြီးနေတုန်း ကျွန်တော် က သူ့ဘယ်ဘက်ပခုံးကို
ပုတ်ပြီးတော့နောက်ကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကောင်မလေးကြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော့် ဟာကြီးကို ငါးချက်တောင်မထုလိုက်ရဘူး အရည်တွေ
ပန်းထွက်လာတာ ကျွန်တော်လက်နဲ့တောင် ခံချိန်မရှိဘူး။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ကောင်မလေးမျက်လုံးမှာ အရည်တွေကို ဝေ့နေတော့တာပဲ။
ကောင်မလေးကိုကြည့်တော့ သူလည်းကောင်းနေတာမို့ ကျွန်တော့်ကို ကလန်ကဆန်လုပ်မဲ့ ပုံမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ ကောင်မလေးခေါင်းကို
ပုတ်လိုက်တယ်။ငြိမ်နေတယ်။ကျွန်တော်က သူ့အဘိုးဘေးကို လက်ပြလိုက်တော့ သွားပြန်ထိုင်နေလေရဲ့။နောက်တော့ အိမ်သာကို သွားဖို့ TOLL
GATE တစ်ခုကို ရောက်လာတယ်လေ။ကောင်မလေးကို ကျွန်တော်က မျက်ရိပ်ပြပြီး သူ့လက်ဖဝါးလေးကို လက်နဲ့ ခြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ အဓိပ္ပါယ်က
မင်းကို ငါလိုးချင်တယ်လို့ပြောတာ။သူတို့ မလေးက တရုတ်တွေနဲ့ ပြည်မကြီးကတရုတ်တွေ ပိုနားလည်ပါတယ်။ကောင်မလေးက
ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ ကြည့်နေတယ်။ကြောက်နေမယ်ဆိုတာကို သိတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒီလို ငယ်ငယ်လေးတွေကို လိုးရဖို့အတွက် ကျွန်တော်က
ပညာစုံသင်ထားတာ။လိုးကိုလိုးမှရမယ်။လိုးလို့ရမယ်ဆိုတာကိုသိရက်နဲ့တော့ ကျော်မသွားနိုင်ဘူး။သူ့ အပျိုမှေးကို ကျွန်တော် ဖောက်မှရမယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်သာကိုသွားတဲ့ လမ်းမှာ ကောင်မလေးကို လိုးဖို့ အကြံရတယ်။မျက်နှာထား မာမာလေးနဲ့ပဲ ကောင်မလေးကို ကျွန်တော်က ဆင်းဖို့
ပြောလိုက်တယ်။သူလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဆင်းလိုက်လာတယ်၊သူ့အဘိုးကတော့ အားကိုးလောက်ပါရဲ့ အိပ်နေတုန်းပဲ။ကောင်းတယ်လေ
ကောင်မလေး အောက်ဆင်းတဲ့ အချိန် တစ်ခြား ကားတွေက ခရီးသည်တွေလည်း ဆင်းကြတာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ကားကတော့
ခရီးသည်နည်းပါတယ်။၁၀ယောက်ကျော်ပဲ ရှိတယ်လေ။ပထမဆုံးထွက်တဲ့ကားဆိုတော့လည်း လူနည်းတာဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ ကောင်မလေး
ဆင်းလာပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အဲ့ဒီ အဝေးပြေးအိမ်သာနောက်ဖက်က ဆီအုန်းခြံကြီးထဲကို ကောင်မလေးကိုခေါ်သွားတယ်။ကောင်မလေးက
ပိုကြောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ မရဘူး ဒီအချိန်မှာ လွှတ်လိုက်ရင် သေသွားနိုင်တယ်။အဲ့တာနဲ့ လက်ကို အတင်းဆွဲပြီးတော့ ဖုန်းကိုပြလိုက်တယ်။
ဖွလိုက်မယ်ပေါ့.။ကောင်မလေးက ငယ်သေးတော့ ရှက်နေမှာလေ။ဒါနဲ့ ငြိမ်သွားတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်ယူလာတဲ့ သတင်းစာ ကြီးကိုခင်းပြီးတော့
အဲ့ပေါ်ကို တွန်းလှဲလိုက်တယ်။အချိန်မရှိဘူးလေ။စကပ်ကို ဆွဲလှန်ပစ်လိုက်တယ်။အတွင်းခံဘောင်းဘီက အနီရောင်လေးကိုဗျ။ကောင်းပါတယ်။
မင်္ဂလာရှိတာပေါ့။ဆောက်ဖုတ်လေးက လည်း သေးလိုက်တာဗျာ။ကောင်မလေးက မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားတယ်။ကျွန်တော်လည်း ကောင်မလေး
နို့ကိုခြေ ဆောက်ဖုတ်ကို တစ်ချက်ယက်လိုက်ပြီးတော့ ဆောက်ဖုတ်ကို အတင်း ဖြဲပြီး လီးစွပ်တော့တာပဲ။ကောင်မလေးဆောက်ရေတွေက
ပိုတောင်ထွက်နေသေးပါလား။ဖြည်းဖြည်းချင်းဆောင့်နေလို့မရဘူး ကားထွက်သွားရင် ဒီကောင်မလေးကျန်နေခဲ့တာသိရင် တရုတ်တွေဝိုင်းသတ်လို့
သေနေမယ်.။ကိုယ်က မလေးမှာ ဘာကောင်မှမဟုတ်ဘူးလေ။သိတယ်။ဒါနဲ့ အမြန်ဆောင့်ရတယ်ကောင်မလေးလည်း ကြည့်ရသေးတယ်။အလဲ့
ကိုယ်တောင်အရည်တွေ မထွက်သေးဘူး။သူက အကြော တစ်ချက်ဆန့်ပြီးတော့ ပြီးသွားတယ်။ကျွန်တော်လည်း သူပြီးသွားတာလေးကိုမြင်ပြီးတော့
မထိမ်းနိုင်တော့ဘူး။လရေတွေကို ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တယ်။အပြင်မှာပြီးရင် သိပ်မကောင်းဘူးဗျ။ပြီးတော့ သားအိမ်ထဲမှာပဲ ခဏလေးစိမ်ပြီးတော့
ချက်ချင်းပြန်ထရတယ်။ဇိမ်တော့ သိပ်မရှိခဲ့ပါဘူးဗျာ၊တစ်ရေးလောက် အိပ်လို့ ရခဲ့ရမှာ။ကျွန်တော့်လီးကိုကြည့်လိုက်တော့ သွေးတွေပေနေပြီ။
ကောင်မလေးလည်းငိုမဲ့မဲ့နဲ့ပေါ့။သူ့စကပ်ကို သွေးတွေမပေအောင် ကျွန်တော်က လှန်ထားပြီးသားဆိုတော့ သူ့အရည်တွေရယ်
ကျွန်တော့်အရည်တွေရယ်ကို ကျွန်တော်က တစ်ရှူးနဲ့ သုတ်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ ကားပေါ်ကို တက်လိုက်တယ်။သူလည်း မောပြီးအိပ်သွားတာပေါ့။kl
ဘူကစ်ဂျာလစ်မှာ ကျွန်တော်ကောသူကောဆင်းတယ်လေ။သူ့အဘိုးနဲ့ ကိုဂျိုးကြီးနဲ့ ကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့ ဆင်လာရင်တောင်နိုးမှမဟုတ်ဘူး။
သူတို့ကိုကားဂိတ်ရောက်မှ နှိုးရတယ်။ကောင်မလေးကိုတော့ ဆေးသောက်ဖို့ ဆေးတစ်ကတ်ပေးလိုက်တယ်။သူလည်းသူငယ်ချင်းတွေရှိမှာပါပဲ။
နောက်ပြီးတော့ မလေးရှားကို ရောက်လာရင် ဘယ်လို တရုတ်မပဲ ဖြစ်ဖြစ်လည်သွားကြတာပဲလေ။ဒီတော့ အေးဆေးပဲ
သူ့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်လေ။သောရှဲ့နီ…..လို့ ။ကောင်မလေးက ရီပြီးကြည့်နေတယ်။သွားပေဦးတော့ ကောင်မလေးရေ လမ်းကြုံရင်
ထပ်လိုးဖြစ်လိမ့်ဦးမယ်ဆိုတာငါရဲရဲကြီးကတိပေးရဲပါတယ်။ KL က ကျဉ်းကျဉ်းလေးပါ။ထပ်တွေ့ဖို့ ဆုတောင်းမိပါသေးတယ်။
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ဘူကစ်ဂျာလစ်ကနေပြီးတော့ ရွှေတောင်ကို ချီတက်လာတာပေါ့။အရင်လိုရေကူးကန်(ဖာတန်း)ကို တန်းမသွားလို့ ကိုဂျိုးက
ပေါက်နေသေးတယ်။သူဘာမှမသိဘူးလေ။ရီရသားဗျ။မပြောတော့ပါဘူး…..ဒါနဲ့ ရွှေတောင်ကိုသွားပြီးတော့ ဘီယာနဲ့
ကြက်သားသုပ်မှာလိုက်တယ်..။အရက်လေးနည်းနည်းနဲ့ ကောင်းလိုက်တာဗျ။အဲ့တုန်းက ရှိုးလည်းရှိတော့ နည်းနည်းပဲသောက်ပြီးတော့ အိမ်သာထဲမှာ
မာရှီဝင်ပုတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ သိဒ္ဓိဝင်မှာပိုက်ဆံလွှဲတယ်။အိန္ဒြာခင်မောင်ဝင်းဆီမှာ မလိုင်ရယ် ကွမ်းသီးရယ် ဝယ်ပြီးတော့ ပြန်လာခဲ့တယ်လေ။
စက်ရုံရောက်တော့ ဖထုပ်မလည်း မရှိတော့ဘူး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ ကုန်း(ဂုန်း) ထောက်လို့တဲ့ သူဌေးနဲ့ ကွိုင်ပြီးကားတာတဲ့။
ကိုဂျိုးကောကျွန်တော်ကော နဖူးမွှေးပါတောင်တက်သွားတယ် …ဆောက်ပြသနာပဲ ငါတို့လက်ချက်နဲ့များ ငြိနေရင်တော့ ဖင်စုတ်ပြီပေါ့။
တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ချွေးပါပြန်သွားတယ်။အဲ့တုန်းကပါ နောက်တော့ လည်း သူဌေးနဲ့ ရတဲ့ဟာတဲ့ဖျက်ချလိုက်တယ်ပြောတာပဲ။
တစ်ခါတစ်လေ ဂိမ်းဆိုင်သွားလိုက်တစ်ခါတစ်လေလေး ညဈေးသွားလိုက်နဲ့ လည်ပတ်နေတာပေါ့ဗျာ မလေးရှားဘဝဆိုတာကလည်းသိတဲ့ တိုင်းပါပဲ။
တစ်ရက်တော့ စားရကံကြုံတာလား ကြမ္မာငင်တာလားတော့ မသိပါဘူး။ကောင်မလေးနဲ့ အီပို့ ပီရိတ်ကို သွားလည်ခွင့်ရသဗျာ။ကိုဂျိုးကို
လုံးဝကိုမသိစေချင်ဘူးဗျ။ကောင်မလေးက လက်တော့ပ်လေး ဝယ်ချင်လို့တဲ့LOWYAT PLAZA ဆိုရင် အရမ်းဝေးတယ်
ဝယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့။ဈေးလည်းသိပ်မရှိပါဘူးလို့ ပြောလိုက်တော့ ဒီမှာပဲ ဝယ်မယ်တဲ့ ။ကောင်းပြီလေ သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ဘာလို့ကောင်းလဲ ဆိုတာ
ခင်ဗျားတို့ သိမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဆက်တင်ရှိတယ်ဗျ ဆက်တင်……ကိုထူးဇော်ကြီးအဲ့မှာရှိတယ်ဗျ။ဒီဘဲကြီးက ဇရှိတယ်။မလေးဂိုဏ်းစတား
တစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာ။တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တွေရှင်းလို့ မရတဲ့ဟာတွေ ဆိုရင် သူဝင်ရှင်းပေးနေကြ။မလေးရဲတွေနဲ့လည်း ပိုင်တယ်
ဒီမှာလူတောင်ရှော့ဖူးတယ်ဆိုတော့ ဇကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဒါနဲ့ ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဗျ။ဒီဘဲကြီးကို မာရှီနည်းနည်းလောက်ခွံ့လိုက်ရင်
ပြီးတယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့ ဘေးဆိုင်က မန်ကျည်းသီးကုလားဆီကနေ ငါးဆယ်ဖိုးဝယ်လိုက်တယ်။
နည်းနည်းတန်တယ်လေ။ကုလားတွေနဲ့လည်း တည့်အောင်ပေါင်းထားရတယ်။မဟုတ်ရင် ဒီမအေရိုးတွေက ကိုယ့်ပါပြန်လုတာဗျ။
သုံးတိုင်စာလောက်ရတယ်ဗျာ။ဒါနဲ့ ကျစ်ထားပြီးတော့ ဂွင်စောင့်နေတယ်။ကောင်မလေးကောကျွန်တော်ကောက စက်ရုံပိတ်ရက်တူတာပေါ့ဗျာ။
တစ်စက်ရုံထဲပဲ ဟာကို။ဒါနဲ့ ဆန်းဒေးရောက်ဖို့ပဲ တွက်နေရတယ်၊ဒီကြားထဲမှာတင်ကောင်မလေးက လှလာလိုက်တာဗျာ။ဆောက်ရမ်းကိုပဲ။လုံးဝကို
ထင်မထားဘူး။သူက အနီရောင်နဲ့ဆို အရမ်းလိုက်ကိုဗျ။
စက်ရုံထဲက ဘဲတွေကိုလည်း ကာထားရသေးတယ်။ကောင်မလေးမှာ အိမ်မှာ ယူရမဲ့သူရှိတယ်ပေါ့။ဘာညာ။တကယ်တော့ ကိုယ်ကကျိတ်ချင်တာဗျ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာကတည်းက စော်တွေကို မုဒိမ်းပဲကျင့်ခဲ့တာ။ဒီတိုင်းပေးရင် မလုပ်ချင်ဘူး။အသက်ကြီးတဲ့ စော်တွေ သေးပေါက်ပြီဆိုရင်လည်း
သွားသွားချောင်းတက်လာ လေးတန်းနှစ်ကတည်းကပဲဗျ။ဒါလည်း ဆိုက်ကို တစ်မျိုးနေမှာပေါ့။ကျွန်တော်က သာမာန်ပေးလို့ တက်လိုးတာမျိုးကို
မလိုချင်ဘူးဗျ။ထားပါလေ ဒါကတော့ မဆန်းပါဘူး။တစ်ယောက်တစ်မျိုးပေါ့။
နောက်နေ့…..ဆန်းဒေးနေ့လေးပေါ့ဗျာ။ရင်တွေခုန်တယ်ဆိုတာက မသိရင် ရှော့မရှိပေမဲ့ သိလာတဲ့ အခါကျရင် ဘယ်လို ရှင်းမလဲဆိုတာကို အရမ်းပဲ
တွေးပူတယ်ဗျာ။အိမ်ထောင်ကွဲရုံတင်မဟုတ်ဘူး စက်ရုံကပါ ကျွန်တော့်ကို ဗွမ်းမှာလေ။ဒီတော့ စီကစ် အီငတ်ပေါ့။ကျွန်တော် စဉ်းစားလိုက်တယ်။
ဒီလိုလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကို သိကို သိနေရမယ်လေ။အဲ့ဒါနဲ့ ဘယ်ရမလဲ ကျွန်တော်လည်း တိုင်ပင်ရတော့တာပေါ့.ကိုထူးဇော်ကြီးဆီကို
ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်၊သူကိုင်တာက ဒီဂျီဆိုတော့ တစ်ကတ်ပြေးဝယ်ပြီးတော့ ဆက်လိုက်တယ်။
“ကျွန်တော် စော်တစ်ဗွေ ဖန်ချင်လို့ဗျာ။အ မတော့ မဟုတ်ပါဘူး”
သူက အ မဆိုရင် မကြိုက်ဘူးဗျ။ အရင် အ မကို ဆေးတိုက်ပြီးခေါ်လာတုန်းက သူ့ဆီမှာ ဥသြတွေ သောင်ထွန်းသွားလို့တဲ့
“မဟုတ်ပါဘူးဗျ ဘဲကြီးရ ရွှေမ ပါ။”
“ဆလာလု ဆင်နမ်းပဲ(အချိန်တိုင်းအားယား အေးဆေးပဲ)”
“ဟုတ်ပြီဗျာ ဒါဆိုရင်လည်း လာခဲ့မယ်လေ။ဘဲကြီးအတွက်ဂန်ဂျားတွေပါတယ်ဗျ။”
“ကြိတ်စမ်း ကောင်လေး ”
“ဘာမှမပူစမ်းပါနဲ့ဗျ။ဒီမှာက မန်ကျည်းသီးတွေ(ကုလားတွေ)ရှိတယ်။ဘယ်တော့မှ မခမ်းဘူး”
“ဒါပဲလေဗျာ ဖုန်းချလိုက်တော့မယ် စော်ကို ဖန်ရဦးမယ် ”
ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း လုံးဝကို တက်ကြွတဲ့ ကြက်ဖကြီးလုပ်နေရတော့တာပေါ့.။နေ့လည်လောက်လည်းကျကော ကောင်မလေးက သွားမယ်တဲ့
အီပို့ ပရိဒ်ကိုရောက်တော့ ကွန်ပြူတာဆိုင်ကိုသွားတယ်။ကောင်မလေးက ကွန်ပြူတာသိပ်တော့ မသုံးတက်ပါဘူး။သူ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဟာကို
တော့ စမ်းသုံးဖူးတယ်ပြောတယ်။ဒါနဲ့ အသစ်ပဲ ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ကိုယ့် အောက်ဆိုက် ပင်ဂျမ်းကို မရီ(ကျွန်တော့်မိန်းမ) ဆီကို မအပ်ပဲနဲ့
ကောင်မလေးကို အမ်း မလို့ သိမ်းထားတာ။တန်တယ်လေဗျာ။ဆောက်ရမ်းတန်တယ်။
နှစ်ထောင့်လေးရာဆိုလည်း ခင်ဗျားဆို အမ်းမှာပါပဲ။
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ခင်ဗျားသိပြီးသားပါ။ဆောက်ဖုတ်ကိုလည်း မြင်ဖူးခဲ့ပြီ။ဒီအသားနုလေးတွေကို ဆွဲစုပ်ပစ်ချင်လောက်အောင်ကို စွဲနေတာ။ညည
ဆိုအ်ိမ်မက်မက်ရတာတစ်မျိုး။ဘေးခန်းက သူ့ညီမကို မှန်းပြီးတော့ မိန်းမကို တက်လိုးရတာတစ်မျိုးနဲ့ အသံမကြား ကြားအောင်လည်း
“အဘန်း အီနီး ဘရပါး( ဘရားသား ဒီဟာ ဘယ်လောက်လဲဗျ)”
“စာတူး ဒူးဝါး ကာဝမ်း(တစ်ထောင့် နှစ်ရာပါ သူငယ်ချင်း)”
“ဘူးကန်း အီနီး ဗျာဆာ့(ဒါပုံမှန်ပါပဲ)”
“အဒါ့ အဆက်စရီ ကား(ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ခုယူမယ်။အပိုပစ္စည်းဘာပေးသေးလဲ)”
ဒီကြားထဲမှာ ပြောစရာရှိသေးတယ်ဗျ။စလုံးမှာလည်း စကားပြောတဲ့ အခါတွေကျရင် လား လား ဆိုပြီးထည့်ပြောတာလေ။အဲ့ဒါမလေးစတိုင်လ်ဗျ။
စလုံးဆိုတာကလည်း မလေးကနေ ခွဲထွက်သွားတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့လည်း ဒီလိုပြောကြတာပေါ့။လီကွမ်ယု ထောင်ပေးသွားခဲ့တာလေ။မလေးစကား
တက်တယ်ဆိုရင် စလုံးမှာ အဆင်ပြေပြီးသားပါ။အားလုံးတော်တော်များများက မလေးစကားကိုလည်း တက်ထားတဲ့ သူတွေဆိုတော့ အိုကေပါတယ်။
ထားဗျာ၊ဒါနဲ့ ကောင်မလေးရယ် ကျွန်တော်ရယ် လက်တော့ပ်ကြီးတွေကို လျှောက်ကြည့်ရင်းနဲ့ တစ်လုံးရွေးဝယ်ခဲ့တာပေါ့။ပိုက်ဆံရှင်းဖို့
ကောင်တာနားလည်းရောက်ရော.။ကောင်တာက ခွေးသားက စော်လေးကို လှမ်းငန်းနေတယ်။ကျွန်တော်က ကောင်မလေးကို ကာထားလိုက်တယ်။
ဒါကို ကောင်မလေးကသိတယ်။ရီနေတယ်။ဘယ်ရမလဲ အမှတ်တွေကိုယူထားရမယ်။
“ဟုတ် အစ်ကို တစ်ခုတည်းပါ။”
“ရွှေပဲလား အစ်ကို ဟုတ်….”
“အာ ကိုစိုးဦး။ရပါတယ် သမီးပေးလိုက်မယ်။”
“ရပါတယ် သမီးပေးရင် သမက်ရနေဦးမယ်။”
“ရပါတယ်ဟာ နင့်အစ်မကြီးက သဘောထားကြီးပါတယ်။နင်သာ လျှောက်မပြောနဲ့”
ကောင်မလေးကိုလည်း ဝင်သလောက်ဆိုက်ကိုတွေ ထည့်ပေးရသေးတယ်။
ဒါနဲ့ အဲ့ စက်ကြီး မ လာပြီးတော့ နွယ်နီရယ် ကျွန်တော်ရယ် နှစ်ယောက် လန်းလာကြတာပေါ့။ ကားပေါ်တက်တယ်ဗျာ၊ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို
“စားလေ ကိုစိုးဦး။ရတာပဲ ဟာကို ဒီနေ့ပိတ်တာပဲလေ။”
အင်း။ဒါဆိုရင် ဆော်ဂွန်း နားကိုသွားမယ်လေဟာ။အဲ့မှာ စားစရာပိုစုံတယ်လေ။ဟုတ်ပြီ…သွားလေ ကိုစိုးဦး
အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့စားသောက်ဆိုင်နဲ့ ကလပ်နဲ့ ကပ် ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်ကို ရောက်သွားတယ်။အဲ့မှာက တကယ်လည်း စားစရာစုံသလို
ဘဲကြီးအိမ်နဲ့လည်း နှစ်အိမ်ကျော်မို့လို့ အဲ့ဒီ့နေရာကို အမြဲတမ်းရောက်ဖြစ်တယ်လေ။
“မကြိုက်ဘူး ကိုစိုးဦး ကြက်သားပဲ စားချင်တယ်။”
“နင်ကလည်း မလေးရှားရောက်တာပဲ ခြောက်လလောက်ရှိတော့မယ် ကြက်သားကြီးစားချင်သေးလား”
“အင်းးးးဒါဆိုလည်း သိုးသားပဲ မှာလေ”
“အိုကေ အဘန်း လန်းဘ် စာတူး ဒတ်ကင်းစာတူး (သိုးတစ်ပွဲ အမည်းတစ်ပွဲ)”
ဒါနဲ့ ဟင်းတွေမရောက်ခင်မှာ ကောင်လေးကို ဆင်ရသေးတယ်။
“နွယ်နီငါ ဘီယာတစ်ဘူးလောက် သောက်ချင်တယ်ဟာ၊”
“သောက်လေ ကိုစိုးဦး အရမ်းတော့ မမူးစေနဲ့ ”
“အခု သမီးတို့ နှစ်ယောက်တည်း မကြီးသိသွားရင် မကောင်းဘူးလေ။”
“အင်းပါ ငါဘယ်တုန်းက မူးဖူးလို့လဲ..”
ပြောမဲ့သာ ပြောတာ ကျွန်တော်မူးပြီးတော့ ရဲကားကို ပြားငါးဆယ်စေ့နဲ့သွားခြစ်လို့ အထဲမှာ
“ဟုတ်ပြီလေ တစ်ဘူးပဲ မှာလိုက်မယ်”
“ကာဝမ်း စာတူး ဟာရီမောင်း( တိုက်ဂါးတစ်ဘူး)”
သောက်လိုက် စကားလေးတွေ ပြောလိုက်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဆိုင် ဘယ်ဘက်ဘေးမှာက ရှီးရှာ ဆိုင်ရှိတယ်၊အဲ့ဒါက ပိုက်နဲ့ဗျာ ဆေးလိပ်ရှည်ကြီးပေါ့
မွှေးလည်းမွှေးတယ်လေ။ကောင်မလေးက ရတော့ ။
“ကိုစိုးဦး အဲ့ဒါဘာနံ့လေးလဲ မွှေးတယ်။”
ရောက်ပြီး အဟေးးးးးးးးးးးး.ဟယ်ရီပေါ်တာထဲက ဗော့လ်တီမော့ ဟယ်ရီပေါ်တာသေတော့ ရီသလိုမျိုးရီလိုက်တယ်။စိတ်ထဲကပါ၊
“ရှီးရှာလေဟာ ဒီကောင်က အပျော်တမ်းသောက်တာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။”
“စမ်းကြည့်လေ ဘာမှမ ဖြစ်တဲ့ဟာကို”
“အေးပါ ပြောစရာလား ဒါအပျော်သောက်တဲ့ဟာကို”
တစ်ခုမှာလိုက်တယ်၊ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို တိုက်တယ်၊ကောင်မလေး နည်းနည်းကောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ မေးကြည့်ရသေးတယ်
ကောင်းလား နွယ်နီ ကောင်းတော့ ကောင်းတယ်၊နင်က ကောင်းတယ်သာပြောနေတာ။မျက်နှာကြီးက နီနေပြီ။
“အန် ဒါဆိုရင် ဒီထက်ပြင်းတာ သောက်ပြရမလားပြော။အင်းးးး ကွဲနေပြီပဲ”
“ရော့ ဒါဆို ဒါသောက်ကြည့်လေ။လက်ထဲက ဆေးလိပ်ကို ပေးလိုက်တယ်။”
ပေးရဲတယ်လေ ဘေးမှာ ဘယ်ဝိုင်းမှာ မရှိဘူး။မဟုတ်ရင် မာရှီနံ့ က အရမ်းပြင်းတယ်လေ။ဆေးလိပ်ထဲမှာ မာရှီတွေကို မနေ့က နေ့လည် ကတည်းကရိုက်ထားပြီးသား။
ကောင်မလေး နည်းနည်း ဝေသွားတယ်။ဒါနဲ့ သိလိုက်ပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ပဲ လိုတော့တယ်ဆိုတာကို
“ခဏလေးကို စိုးဦး သောက်တုန်းက ဘာမှမဖြစ်ဘူး အခု ခေါင်းမူးလာပြီ”
သိတယ်။ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကို သိတယ်။အခုမှမဟုတ်ဘူး ကျောင်းသားဘဝကတည်းက ကိုသိတာ။
အပင်လိမ်မှတော့ ကိုင်ဆောင့်ထားသလို ဖြစ်နေပြီလေ။
“ငါ့သူငယ်ချင်းကိုထူးဇော်ကြီးဆီမှာ ခဏနားမယ်ဟာ။ဒီမှာဆို ကြွက်တွေရှိတယ်။”
အဲ့ဒါနဲ့ taxi သမားကို ပြောပြီးတော့ ဘဲကြီးဆီကို လစ်လာခဲ့တယ်၊
ကားပေါ်မှာကတည်း က ဖုန်းကြိုဆက်ထားပြီးသားဆိုတော့ ဘဲကြီးက တံခါးဖွင့်ထားပြီးသား။
“ဆောက်ကောင်လေးတွေ မင်းတို့ ကြွက်ကိုက်မယ်.။ကားသမားက ဘာမှမပြောဘူးလား”
“ကြည့်ပဲ ကြည့်တယ်လေ ဘာမှမပြောဘူး”
ကြည့်လုပ်ကွာ ဒီလောက် ရုပ်ပျက်နေတာ စော်လေးက ရွှေရုပ်ပေါက်နေလို့သာ မ ရုပ်ပေါက်နေရင် မင်းဆာကစ်ပဲ
အေးပါဗျာ။ခင်ဗျား အိမ်ထဲ ဒီနေ့ကော ဝင်ရဦးမှာလား
ဒါနဲ့ ကောင်မလေးကို ရှေ့ခန်း ဆိုဖာပေါ်မှာ မှီပြီးတင်ပေးထားတယ်။ဘဲကြီးကို မာရှီရယ် ဆိုင်က ဝယ်လာတဲ့ ဘီယာနဲ့ ဝိုင်ရယ် ပေးပြီးသိပ်လိုက်တယ်။
သူနဲ့ အဆင်ပြေတာ အဲ့ဒါပဲ ဒီဘဲကြီးက စော်ကို စိတ်မဝင်စားဘူး မူးယစ်ဆေး တော့ အသေစွဲ…………
ဘဲကြီးက မှိတ်ပြီးတော့ အောက်ကို ဆင်းသွားတယ်။
“သောက်ကား ကွန်ကြီးမာနား (သော့ဘယ်မှာ ရှိတယ်ဆိုတာကို သိတယ်နော်။)”
သိတာပေါ့ ခဏခဏ ရောက်နေတဲ့ ဟာကို စားပွဲရှေ့က ဝှိုက်ဘုတ်ကြီးမှာချိတ်ထားတာ။
“ဆာယာသောက် အဘန်း မာကာစေး(သိတယ် ကျေးဇူးပဲ)”
အချိန် သိပ်မရဘူး စက်ရုံကို ပြန်ရတော့မှာ ဆိုတော့ ကောင်မလေးကို ကိုထူးဇော်ကြီးဘေးခန်းထဲကို ခေါ်သွင်းရတယ်။စော်လေးက ဇတ်ကျိုးလို့ သေမှာတောင်
မာရှီဆောင့်ရင် သေလို့ ရတယ်။ခင်ဗျားတို့ လည်း ကြုံဖူးမှာပါ။အဲ့ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ကောင်မလေးကို အရင်ထည့်ထားပြီးတော့ ရေချိုးမလို့လုပ်သေးတယ်။ဒါပေမဲ့ အချိန်မရတာနဲ့ ဘောင်းဘီချွတ်ပြီးတော့ ကောင်မလေးကို စိမ်ပြေနေပြေ ချွတ်တော့တာပေါ့
နွယ်နီ။….”ပြောလည်းပြော လက်ကိုလည်း လှုပ်ကြည့်ရသေးတယ်။
ဒီလောက်ပဲ ထွက်လာတယ်။သိလိုက်ပြီ ဒီအနေအထားက လိုးရင်အော်မယ် နှိုက်ရင်မသိဘူး
ဒါနဲ့ ကောင်မလေးအကျီ င်္ကို ချွတ်လိုက်တယ်။ရင်တွေခုန်လိုက်တာဗျာ။
ဇာဘော်လီလေးနဲ့ နို့သားလေးတွေက လျှံထွက်နေတယ်၊ဆက်ချွတ်တယ်ဗျာ။
ခင်ဗျားတို့ကို စာရိုက်နေတော့သာလွယ်တာ တကယ်လိုးခဲ့တုန်းက ကြောက်လည်းကြောက်တယ် ရင်လည်းခုန်ရတယ်ဗျာ။ပြီးတော့ ဘော်လီလေးကိုမချွတ်ခင် သူဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်လိုက်တယ်။အောက်ခံဘောင်းဘီက အဖြူရောင်လေး ပန်ဒါတံဆိပ်လေးနဲ့
စီးနေမှာကပဲ…မို့လိုက်တဲ့ ဆောက်ဖုတ် အသားလေး လုံးဝ ရွဲ့ပဲ့နေခြင်းမရှိဘူး။
အပျိုတစ်ယောက်ရဲ့ ဆောက်ဖုတ် နုနုလေး။ဒါနဲ့ ကောင်မလေးကို တစ်ဖက်ကိုလှန်ပြီးတော့ ဘော်လီချွတ်လိုက်တယ်။ကောင်မလေး မအော်ဘူး မနိုးသေးဘူး။
ကောင်မလေးဘော်လီကို ချွတ်လိုက်တော့မှ ရင်ပိုခုန်သွားတယ်ဗျာ။အပျိုနို့ခဲလေး ကို မြင်လိုက်ရတယ်။အသီးလေးပဲ ရှိသေးတယ်။အခဲလေးပေါ့..။
ဒီကောင်မလေးက ယောက်ျား လျာလေး ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့နို့လေးကို ကိုင်ဆကြည့်လိုက်တော့ အရမ်း နွေးနေတယ်ဗျာ။ကောင်းလိုက်တာ..။
ဆောက်ဖုတ်ကို လှန်ချလိုက်တယ်။ကောင်မလေး တွန့်သွားတယ်။မတက်နိုင်ဘူး နိုးလည်းနိုးပါစေတော့။မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့ မနိုးသေးဘူး၊ဒါနဲ့ ဆောက်ဖုတ်လေးကို ဖြဲပြီးတော့ လျက်ကြည့်လိုက်တယ်။ကောင်းလိုက်တာဗျာ မွှေးနေတာပဲ။တော်တော်ကို အဖိုးတန်တဲ့ ဆောက်ဖုတ်။ဆော်လေးက အသားဖွေးတော့ ဆောက်ဖုတ်လေးက နီတွတ်နေတာပဲ။ကျွန်တော်လည်း ဘာပြောကောင်းမလဲ ဆောက်ဖုတ်လေးကို
ယက်တော့တာပေါ့၊စော်ဆောက်မွှေးလေးတွေက အစ သပ်ရပ်မှု့ရှိတယ်။ပြီးတော့ မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဗျာ။စော်လေးလည်းမသိရအောင် နှုပ်ခမ်းလေးကို တစ်ချပ်စုပ်လိုက်ပြီးတော့ လီးကို ဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးထည့်တယ်။ကောင်မလေး နိုးမယ်ဆိုတာကိုသိတယ်။ဒီလီးကို သူခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ….။
လိုးရင်းလိုးရင်းနဲ့ ပါကင် ပိတ်လေးနားရောက်တော့ တောင့်မခံနိုင်တော့ဘူး ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ်။
“……အူး..အား ဘာလုပ်တာလဲ “ကိုစိုးဦး ဘာလုပ်တာလဲ။”
မတက်နိုင်ဘူး လက်တွေနဲ့လည်း ကုတ်တယ် ဖာသည်မလေး လက်သည်းရှည်ကြီးတွေနဲ့ မတက်နိုင်တော့ဘူး ဆက်စောင့်ထည့်လိုက်တယ် အပျိုမှေးပေါက်သွားတယ်ဗျာ။
တစ်ချက်တည်းပါပဲ။ကောင်းလိုက်တာ နွေးသွားတယ်။အတွင်းပိုင်းရောက်တော့ ပိုနွေးသွားတယ်ဆိုတာ ဒါပဲနေမှာ။ဒါနဲ့ နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးချက်လောက့် စောင့်လိုက်ရတယ်ပြီးသွားတယ်။
“ဆင်းပါ မလုပ်ပါနဲ့ တော့ ဆင်းပါ…အီးဟီး.။။”
ကောင်းကောင်းကြီးကို လိုးလိုက်ရပြီ။နောက်တစ်ချီထပ်လိုးချင်နေပြီ။ကောင်မလေးကို မှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ရုန်းကန်နေတယ်
ဇတ်ပိုးကို ဖြောင်းခနဲ နေအောင်အုပ်ချပစ်လိုက်တယ်
“မသာမ သေချင်လို့လား နင့်ကိုတစ်ခါလိုးပြီးပြီ ”
“နောက်တစ်ခါလိုးလို့ လီးဖြစ်သွားမှာမို့လို့လား ဒါမလေးရှားနော် သေသွားမယ်။”
ငြိမ်ကျသွားတယ်။ဒါနဲ့ မှောက်ခိုင်းပြီးတော့ ဖင်က နေ လျှိုပြီးတော့ လီးကိုသွင်းတယ် ဇိမ်ကျလိုက်တာဗျာ။
တော်တော်ကို ကျပ်တယ်။လေးငါးချက်လောက် ဆောင့်လိုက် နို့သီးလေးကို ကိုင်လိုက် ဇတ်ပိုးလေးကို စုပ်လိုက်
ကောင်မလေးကတော့ အောက်ကနေ ငိုနေတော့တာပဲ.။အဲ့ဒါက ကျွန်တော့်စိတ်ကို ပို ကြွစေတယ်လေ။
“ထ ထ နွယ်နီ။ငါ့လီးကို လာစုပ်ပေး”
တစ်သှူးလးကိုင်ပြီးလီးကို လာသုပ်ပေးတယ်။ပြီးတော့ စုပ်ပေးရှာတယ်။ကျွန်တော်က သူ့ခေါင်းကို ကိုင်ပြီးတော့ သူ့ပါးစပ်ထဲကို လီးနဲ့ လိုးတာပေါ့ သုံးမိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။လရည်တွေကို ဘေးက ကော်ဇော်ပေါ်ကို ပန်းထည့်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးလည်း ဘေးမှာ ငိုင်ငိုင်လေးနဲ့ ထိုင်ပြီးတော့ မှိုင်လိုက် ငိုလိုက်ပေါ့
သူ့အစ်မကိုသွားတိုင်မှာ ကြောက်လို့ ကောင်မလေးကို ခြောက်ထားရတယ်
“ဒါတွေကို နင့်အစ်မကို သွားတိုင်ရင်နင့်အစ်မလည်း တစ်ခုလပ်ဖြစ်မယ်”
” ငါလည်း ထောင်ထဲဝင်ရမယ် နင်လည်း သေမှာနော်”
“ကြားလား မလေးရှားမှာ တစ်ယောက်သတ်ရင်သုံးထောင်ပဲ ပေးရတယ်ကြားလား”
“ဟုတ် ဟုတ်ကြားပါတယ် မပြောရဲပါဘူး။မကြီးကို ကြောက်ပါတယ်။”
“ဟုတ်ပြီ ဒါဆိုရင် ငါလိုးချင်လို့ ခေါ်တဲ့ အခါတိုင်းလည်း ကဂျီကဂျောင်မလုပ်နဲ့နော် သေသွားမယ် သိလား”
အင်း ဘီလူးခေါင်းဆောင်းရတော့မှာပေါ့…ကောင်မလေးကို နောက်ထပ် တစ်ချီထပ်လိုးဖြစ်သေးတယ် ကောင်းလိုက်တာ ကောင်မလေးလည်း ကောင်းနေမှာပဲ အပေါ်ကနေလည်း ဆောင့်ပေးရှာတယ် အပျိုနို့သီးလေးကို ကာကာပြီးတော့ ရှက်နေတာပေါ့။
ပြီးတော့ ဘဲကြီးကော်ဇော်တွေနဲ့ မွေ့ရာတွေကို လျှော်ပေးခဲ့တယ်။သော့ကိုယူခဲ့ပြီးတော့ ပြန်လာခဲ့တယ် သူကောင်းနေမှာဆိုတော့ စောင့်မနေတော့ဘူး သူ့မှာလည်းသော့တစ်ချောင်းအပိုရှိတယ်လေ။
စက်ရုံကို အသားတကျ ပြန်လာတယ်။ကောင်မလေး ပေါင်ကွတာကို သူ့အစ်မ သိပ်ရိပ်မိမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီလ က အပ်ထည်တွေများတော့ စက်ရုံထဲမှာပဲ အချိန်ကုန်နေတယ်။ထူးခြားတာကတော့ ကောင်မလေးကို အပြန်ခရီးက ကားပေါ်မှာ ခေါင်းကို ကိုင်လိုက်တော့ ကောင်မလေးခေါင်းက ကျွန်တော့် ပုခုံးပေါ်ကို အီ ခနဲ
ဇတ်သိမ်း …မျှော်(ဇီဝဇိုး) မဟာနန်းပင်တိုင်( maharnan.com)
ဆောရီးဘဲကြီးရေ တိုင်တွေပတ်နေတာနဲ့ မရေးဖြစ်တာ…စက်ရုံထဲမှာ နငယ်တွေထပ်ရောက်လာလို့ သင်ပေးနေရတာ။
ပြန်လာကြတာပေါ့ဗျာ။ကောင်မလေးကို ဝိုက်ပြီးတော့ ဒုတ်ကလည်း နာ..ကောင်မလေးကလည်း တစ်လမ်းလုံးကျွန်တော့် ခါးချည်းပဲ ဖက်ပြီးတော့ ချွဲလိုက် ပစ်မထားရဘူးနော်ပြောလိုက်ပေါ့။ အကဲပိုနေတာတော့ မဟုတ်ဘူးဗျ..ငိုမဲ့မဲ့လေးနဲ့ ဆိုတော့လည်း သနားမိသားလားဗျာ။
ထားပါလေ။စက်ရုံကို ပြန်ရောက်တော့ ထင်တဲ့အ တိုင်းပါပဲ..မိန်းမလည်း ပြန်မရောက်သေးဘူး။သူလည်း ကျွန်တော့်ကို အတော်ချစ်တော့ စိတ်ချရှာပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်တော့်အတွက် အသက်ရှူချောင်နေတာလေ.မဟုတ်ရင် လင်မယား ကွဲပေါက်ပဲဗျာ။နောက်ရက်တွေလည်း နွယ်နီ့ကို စားချင်သေးတယ်ဗျာ.။ကောင်မလေး ထပ်များပေးဦးမလား ပေးမယ်ဆိုရင် ဘယ်ကို ခေါ်သွားရမလဲ မသိသေးဘူး.။
ဒါနဲ့ ပဲ နောက်တစ်ပတ် စက်ရုံပိတ်ရက် ရောက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ရယ် ကိုဂျိုးကြီးရယ် မာရှီထိုင်ပုတ်နေတုန်း မိန်းမကလာပြီးတော့ ဂျီလာကျတယ်။
“ယောက်ျားရေ မိန်းမ အိုင်ဖုန်းလေးကိုင်ချင်လို့”
“ဘာအမျိုးအစားလဲကွာ နောက်ဆုံးပေါ်လား ”
“မင်းကလည်း သူဌေးဆိုက်ဖမ်းနေပြန်ပြီ ပိုက်ဆံမရှိပါဘူးဆိုမှ”
(တကယ်တော့ ကောင်မလေးအတွက် လက်တော့ပ် ဝယ်ပေးလိုက်လို့ ပိုက်ဆံမရှိတော့တာ)
“အင်းပါ ရီသိပါတယ်။အခုဟာက ညီမလေးလည်း လိုချင်နေတာ။ရီကောပဲ”
“အေးလေ ဟိုကောင်မလေးကတော့ ထားပါ သူ့လစာ ထုတ်ပြီလေ ကိုယ်တို့မှ လစာမထုပ်သေးတာကို”
“အင်း…ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ အသစ်လေးဆိုတော့ ကိုင်ချင်တာပေါ့လို့”
“ဟုတ်ပြီလေ ဒါဆိုရင် ကိုယ်ဖန်လိုက်ဦးမယ်။ဟုတ်ပြီလား”
ရီပြီးထွက်သွားတယ် .ခေါင်းပူသွားတာ က
ကျွန်တော်….။ဒါနဲ့ အကြံထုတ်ရပြီ ကိုဂျိုးကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ ကွမ်းဂျိုးကြီးနဲ့ လာရီပြနေတယ် ။ပြသနာပဲ သူ့လည်း အားကိုးလို့ ရမှာမဟုတ်ဘူး။သူတောင် တစ်နေ့ကို ထမင်းတစ်နပ်ပဲစားပြီး ထိုင်စုနေတာ။သူ့အတွက်က ဒညင်းသီးတစ်လုံးလောက်ရရင် အဆင်ပြေနေတာ.။ဒါကြောင့်လည်း မန်နေဂျာကြီးက သူ့ကို ဒညင်းသီးချည်း လွှတ်ကျွေးပြီး နှပ်ထားတာလေ။
ဒီအတိုင်း ဆိုရင်တော့ ကိုတာရာယာကိုလည်း မသွားနိုင်တော့ပါဘူး.ဖားသားလေးများစားမလား လို့ ကြံစည်ထားတာ။ဖားမတွေက ဆောက်ရမ်း ပုလွေကောင်းတယ်နော်၊ဖင်လည်း ရှိသင့်သလောက်ရှိကြတော့ စားကောင်းသားလော။ရွှေတွေကတော့ ရှိပါတယ်။ရှားတယ်လေ။သူတို့ ကို စားလည်း သူတို့က မလေးရှားမှာ အစ်ကိုကြီး ကောင်းလားဆိုရင် ကိုယ်တွေ က မလုံမလဲတွေဖြစ်ရတာ။တစ်ခါတော့ စားဖူးသား။မကောင်းပါဘူးဗျာ။စိတ်လည်း ဖီးလ်အပြည့်မရပါဘူး။ထားဗျာ။ဒီနေ့လည်း မာရှီနည်းနည်းပုတ်ပြီးတော့ မိန်းမကို ဝိုက်ဦးမှပဲ.။
ပြောမဲ့သာ ပြောရတာ….တကယ် ဝိုက်ချင်နေတာက ခယ်မလေးကို ဗျာ။ဒီကောင်မလေးက တစ်ခါလိုးပြီးကတည်းက ဖင်တွေလည်း စိုတက်လာတာ။ရင်သားကြီးကလည်း မောက်ပြီးတော့ တကယ် အပျိုကြီးဆိုက်ဖြစ်လာတာ။မိန်းမ ဈေးသွားတဲ့ အခါတွေ ဆိုရင် ကောင်မလေးကို အခန်းနားမှာ နို့ညှစ်ရတာ တစ်မျိုး မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ဆောက်ဖုတ်အုံလေးကို နှိုက်ရတာ တစ်ဖုံနဲ့ သိပ်ကောင်း။အကြိုက်ဆုံးကတော့ လက်ဆေးဇလုံနားမှာ သူပန်းကန်တွေ ဆေးတဲ့ အခါကျရင် နောက်ကနေ ဖင်ကို ကပ်ပြီး ဂေါ့ကြီးနဲ့ ထောက်ထားရတာကို အားအရဆုံးပဲ။ဆောက်ရမ်း စေးကပ်နေတာပဲဗျာ။
မိန်းမ အလုပ်ကိုသွားတယ်။ကိုယ်က ညဆိုင်းဆိုတော့ ကောင်မလေးကို တစ်ချီလောက်တော့ လိုးချင်နေပြီ။သူလည်း အနာကျက်နေလောက်ပြီလေ.။ခေါ်မကြား အော်မကြားနဲ့ ကောင်မလေး ဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်..။
“ဟာ..”.စိတ်ထဲမှာလည်း ထိတ်ခနဲ ဖြစ်သွားတယ်။ဒီဘဲကြီး အလုပ်မသွားဘူးလားဟ။..
မလုံမလဲဖြစ်နေရပြီ။ဒါနဲ့ ဘဲကြီးအခန်းကို ချောင်းကြည့်လိုက်တော့ စ်ိတ်ထဲမှာ ဒေါသတွေ လုံးခနဲ လှိုက်ပြီးတက်လာတယ်ဗျာ။ကောင်မလေးက ဘဲကြီးရဲ့ ဗိုက်ပေါ်ကနေ တက်ဆောင့်ပေးနေတာ။ဆောက်ဖုတ်လေးကို မည်းသည်းနေတာပဲ.။အရည်တွေ အရမ်းကို ထွက်နေပြီ။ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။တော်တော် ရက်စက်တဲ့ ဘဲကြီးဗျာ။ကျွန်တော်တောင် တစ်ခါပဲ စားဖူးတဲ့ ကောင်မလေးကို သူ လုပ်ရက်တယ်ဗျာ။စည်းမထား ဘူး။အထဲကို ဝင်ပြီး ဝုန်းပစ်လိုက်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ ဆက်စောင့်ကြည့်နေလိုက်တယ်။
နွယ်နီ ကိုယ့်ကို မှုတ်ပေးပါလားကွာ
တောက်..ငါတောင် မလုပ်ခိုင်းရက်ဘူး ဒီဘဲကြီးကွာ
“အင်းလေ မှုတ်ပေးမယ်။တစ်ရှူးပေး..တစ်ရှူးနဲ့ သုတ်ပြီးမှ မှုတ်ပေးမယ် အရည်တွေ အရမ်းထွက်နေတာလေ။”
ဘဲကြီးက တစ်ရှူးပေးလိုက်တယ်။ကောင်မလေးက တစ်ရှူးနဲ့ ဘဲကြီးဟာကို သုတ်လိုက်တယ်.ပြီးတော့ ကောင်မလေးနှုပ်ခမ်း လှလှလေးနဲ့ သူ့ ဟာကြီးကို ငုံလိုက်တယ်။ဘုရား ရေ…ဒီဘဲကြီးဟာက အရင်ကထက်တောင် ကြီးလာပါပေါ့လား ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ဖားမ ကိုချတုန်းက ထက်တောင် ပိုပြီးတော့ ကြီးလာနေပြီ.။ကောင်းလိုက်တဲ့ ဟာကြီး။…တင်းနေတာပဲ ကိုယ်တောင်ကြည့်ရင်းနဲ့ ဖင်ကြိမ်းသွားတယ်။စားပေဦးတော့ ဘဲကြီးရာ ခင်ဗျားကံပေါ့။ကောင်မလေးကလည်း ဒီလို အညာသားကြီးကို ဘာသွားကြိုက်မှန်းလည်း မသိဘူးဗျာ။ကောင်းကောင်းကိုပေးနေတော့တာ။
“အားအား ကောင်းလာပြီ နွယ်ရေ.အားးးးးးး”
“ပြီးတော့မယ် ဆက်မှုတ်ထား အထဲမှာပြီးမှာနော် မထုတ်လိုက်နဲ့.။.”
“အင်း..ကောင်းတယ် ကောင်းတယ် ဗြစ်..”.
ပြောလို့တောင် မဆုံးသေးဘူး ဘဲကြီး ဆန့်ငင် ဆန့်ငင်ဖြစ်သွားတယ်။အသက်ငင်နေတာတော့မဟုတ်လောက်ဘူး။ပြီးသွားတာဗျ။ဆောက်ဖာသည်မလေးကလည်း
သုတ်ရည်တွေကို ပြီးတဲ့ အထိခံပြီးတော့ ဘေးကို ထွေးထုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ကောင်းကွာ ဇိမ်ပဲ ခံစားစမ်း ဘဲကြီး..ကောင်းစားစမ်း။စိတ်ထဲကတော့အရမ်းကို ဒေါသထွက်ပေမဲ့ ကောင်မလေးက သဘောတူတာဆိုတော့ ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေ.။
“ကိုကြီးသဘောလေ လိုးချင်သလောက်သာလိုး ”
“ဒီနေ့ ကိုစိုးဦးလည်း အလုပ်သွားတယ်။မရီလည်း မရှိဘူးဆိုတော့ အေးဆေးပဲ တစ်နေကုန်ဗျင်းလို့ရတယ်လေ။”
“ဒါဆိုရင်လည်း ဖင်ကုန်းပေးလေ နော် ”
“ဖင်လေးကို ထောင်ပြီးတော့ လိုးချင်တယ်။ဖင်တစ်ခါမှ မလိုးဖူးသေးဘူး။”
“အန် ဖင်မလိုးဖူးသေးဘူးဆိုတော့ အဖုတ်တွေကိုတော့ လိုးဖူးတယ်ပေါ့။ပြောတော့ နွယ့်ကို အရင်ဆုံးလုပ်ဖူးတာဆို ပေါ်ပြီ…။”
“မဟုတ်ပါဘူးကွာ အဖုတ်ကိုလိုးဖူးတာလည်း မင်းနဲ့မှ ပထမဆုံးပါ။”
အော်ပြောလိုက်ချင်တယ်။ချောင်ကစ်ကို တစ်လ တစ်ခါမှမသွားရရင် လီးရာဇဝင်ရိုင်းတယ်ဆို။ရိုးရာပျက်ရင် နတ်ကိုင်မယ်ဆို…….ပြောပြလိုက်ချင်တယ်။အားလုံးကြားအောင် ဒီဘဲကြီး အညာသားလို့
“အင်းပါ ဖင်ကုန်းပေးမယ် အတင်းဆောင့်မလိုးရဘူးနော်။”
ကောင်မလေးက ဖင်ကို ထောင်ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တစ်ခါပဲ လိုးပေးထားတဲ့ဆောက်ဖုတ်လေးက တော့ အရမ်းကို စိပြီးတော့ လှနေတုန်းပဲ။အမွှေးတွေကလည်း လှလိုက်တာ…စင်းနေတာပဲ သူ့ဆီးခုံကလည်း လုံးဝကို ပြောစရာမရှိဘူးဗျာ။ဖင်သား နီနီလေးရဲ့ အဆုံး စအိုဝလေးကတော့ ရင်ခုန်စရာပါ။ကျွန်တော်တောင် သူ့ဖင်လေးကို အားရအောင် မလုပ်ဖူးသေးဘူး။ဖင်လေးက စိနေတာပဲ။ရဲရဲလေးရယ်။
ဘဲကြီးက စော်လေး ဖင်ပေါက်လေးကို စုပ်ပေးနေတယ်။သေစမ်းဗျာ။ရွံစရာတောင်ကောင်းသေးတယ်။ကိုယ်ကတော့ ဒါမျိုးမလုပ်ပေးနိုင်။ဒါကြောင့်များဘဲကြီးကို ခိုက်သွားတာများလား။
နောက်ထပ် ဆောက်ဖုတ်လေးကိုထပ်ပြီးတော့လျက်ပေးတယ်။ကောင်မလေးက ခုနက ရေဆေးထားတာဆိုတော့ လျက်ကောင်းပေါ့ဗျာ။ဝင်းနေတာပဲ ဆောက်ဖုတ် အတွင်းသားလေးတွေက ဘဲကြီးက လျက်လိုက် ဖင်ပေါက်လေးကို ကလိလိုက်နဲ့ ဆိုတော့ ကောင်မလေးက မခံနိုင်တော့ပဲ ဘဲကြီး ဟာကို လှမ်းကိုင်ပြီးတော့ သူ့အပေါက်ဝကို
လှမ်းထည့်နေတာ မျက်နှာလေးကို မော့လို့….
“အား အဟ အဟဟဟ ကောင်းလိုက်တာ”
” လိုးပါတော့ ဖင်ကို လည်း လိုးပါတော့ ကောင်းနေပြီ။တောင်းပန်ပါတယ် လိုးတော့လေ”
ကောင်မလေး ပါးစပ်က ဆောက်တစ်လွဲတွေထွက်လာတဲ့ အထိ ဘဲကြီးကမှုတ်လိုက် နှိုက်လိုက် လုပ်နေတာ၊အရမ်းကို ကောင်းနေတဲ့ ပုံစံပဲ ဆောက်ရမ်းကို လန်းနေပြီ။ဘဲကြီးက သူ့လီးကို သူဆွပြီးတော့ ကောင်မလေး ဆောက်ဖုတ်ထဲကို လီးထိုးထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှ တစ်ချက်ချင်းလိုးသွင်းနေတယ်လေ။
“အား ဗြစ် ထုတ် ဗွက် ဗွက် …”
အသံတွေကို ဒီဘက်ခန်းကနေတောင် ကြားနေရတယ်ဗျာ။ဒီအချိန် စက်ရုံထဲက လူတွေလည်း ဒီကို မလာကြသလို ကျွန်တော်တို့လည်း မရှိမှန်းသိတော့ ဆောက်ရမ်းကို လိုးကောင်းပေါ့ဗျာ။အသံကြီးတွေကို အောင်လို့။ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်တော်အရမ်းခိုက်တဲ့
ကောင်မလေးကိုင် ဖင်တစ်ပြန် ခေါင်းတစ်ပြန်လိုးနေတော့တာပေါ့ဗျာ။
အချက် နှစ်ဆယ်ကျော်လောက်လည်း ရောက်ရော ကောင်မလေး ဖင်ကို ခွက်ပြီးတော့ ထောင်ပစ်လိုက်တယ်။သိလိုက်ပြီ နွယ်နီ အရမ်းကို ကောင်းနေပြီဆိုတာကိုလေ။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ဖင်ကြီးခွက်နေတာကို မြင်ရတော့ အရမ်းကို ဖီးလ်တက်သွားတယ်။ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့ဘူးဗျာ။ဒါနဲ့ အမြန်ပြီးပါစေလို့ ဆုတောင်းပြီးစောင့်နေလိုက်တယ်။ကောင်မလေးက တစ်ချီပြီးခါနီးမို့လို့ ထင်တယ်။ဆောက်ဖုတ်လေးက ရှုံ့တွတွလေးဖြစ်လာတယ်။
“အ…အဟ..အ ကောင်းနေပြီ မြန်မြန်လုပ်တော့လေ ကောင်းနေပြီ”
“အင်းပါ ပြီးတော့မှာပါ ခဏစောင့် ဒီမှာလည်း ပြီးတော့ မယ် ခဏစောင့်နော်”
“အင်းးး လုပ်လုပ် ပြီးပြီ မရတော့ဘူး ပြီးပြီ….အားးးးးးးးး”
ကောင်းမလေး ခါးကို ကော့တက်ပြီးပြီးသွားတယ်။ဘဲကြီင်္းလည်း ပြီးသွားပြီထင်တယ်။အရည်တွေကို သားအိမ်ထဲကိုပဲ ပန်းထည့်လိုက်တယ်။ကောင်းလိုက်တာ။အရမ်းကို ရွှဲနေတော့မှာပဲ။ကောင်မလေးကတော့ ခေါင်းဦးပေါ်ကို လက်နှစ်ဖက်လုံးထောက်ပြီးတော့ ကျသွားတာပဲ။အရမ်းကို ကောင်းနေတဲ့ ပုံပဲ.ဘဲကြီးလည်း ဖင်လိုးမလို့ဟာကိုတောင် မေ့သွားပုံပဲ။
ကောင်မလေးက ဘဲကြီးကို မျက်မှေးလေးနဲ့ ကြည့်ပြီးတော့
“ကိုကြီး သမီး ရေသွားဆေးလိုက်ဦးမယ်”
“အင်း သွားဆေးလေ ညလေး။”
တွေ့ပြီးကောင်မလေးရေဆေးရင် ရေချိုးခန်းက ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာလေ။ကျွန်တော် ရေချိုးခန်းက စောင့်နေလိုက်တယ်။
ကောင်မလေး ဝင်လာတယ်.။ကျွန်တော်ကတံခါးရွက်နားမှာ ခိုပြီးတော့ ရပ်နေလိုက်တယ်။ကောင်မလေး ပေါင်ကွကွနဲ့ ဝင်လာတယ်။ဒေါသဖြစ်စိတ်ရော နှမြောတဲ့စိတ်ရော ရောပြီးတော့ ကောင်မလေးကို တစ်ခုခု လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ကောင်မလေးက မီးဖွင့်ပြီးဝင်လာတဲ့အချိန် ကောင်မလေး ပါးစပ်ကို လှမ်းပိတ်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးအော်တယ်။ဒါပေမဲ့ အသံမထွက်သွားဘူး။ကောင်မလေး မျက်လုံး အဝိုင်းလေးနဲ့ ကြည့်နေတယ်။သူလည်းသိသွားပြီလေ.။ဒီနေ့ သူတို့လိုးနေတာကို ကျွန်တော်မြင်သွားပြီဆိုတာကို။
ကျွန်တော်က သူ့ပါးစပ်ကို ပိတ်ထားရင်း တိုးတိုးနေဖို့ လက်ပြလိုက်တယ်။ကောင်မလေးက ခေါင်းကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ငြှိမ့်တယ်လေ။
“နွယ်နီ ဘာဖြစ်လို့ သူနဲ့ သွားအိပ်တာတုန်း ”
“.နင်တို့ဖြစ်နေကြတာ ကြာပြီလား ဘယ်နှခါလောက်ရှိပြီလဲ ငါ့ကို ပြောစမ်း”
“လေး လေး ခါလောက်တော့ ရှိပါပြီ”
“ဘာ လေးခါတောင် ရှိပြီ ဟုတ်လား ”
“ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ နင် ကားပေါ်မှာပြောတော့ အပျော်မကြံပါနဲ့ဆို ငါ့ကို ချစ်တယ်ဆို”
“အီးးးးးဟီးးး အီး အစ်ကိုကြီးရယ်”
ကောင်မလေးက အကျယ်ကြီး ငို မလုိ့လုပ်တယ်။
“ဟာ မငိုနဲ့ လေ ဟိုလူကြားသွားမယ်။”
“ပြောလေ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုသွားကုန်းတာလဲ သူက နင့်ကို ယူမှာမို့လို့လား”
“သူမယူဘူးဆိုတာကို နွယ်နီ သိပါတယ်။”
“ဒါပေမဲ့ ဒါက မနေနိုင်လို့ ဖြစ်သွားတာပါ.။သူ့ကိုလည်း ဘာမှသွားမလုပ်ပါနဲ့နော်။”
“သူက ရည်းစားစကားပြောရင်းနဲ့ နွယ်နီ့ကို နွယ်….”
“ပြောစမ်း နင့်ကိုသူက မုဒိမ်းကျင့်လိုက်လို့လား။မ”
“မဟုတ် မမမ မဟုတ်ပါဘူး။”
“သူက နွယ်နီ့ ဆောက်ဖုတ်ကို မှုတ်တယ်”
” လျှာနဲ့ ယက်တယ်။ပြီးတော့ နွယ်နီ့ဖင်ကိုလည်း လျှာနဲ့ ယက်တယ်။”
“မခံနိုင်တော့လို့ အဖြေပေးမဲ့ ညမှာတင် လိုးဖြစ်သွားရင်းနဲ့ ”
“ကိုကြီးနဲ့လည်း ဆက်လုပ်လို့ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ သိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူနဲ့ပဲ ဒီလို နေဖြစ်သွားတာပါ။.”
“ဒါပေမဲ့ကို ကြီးရယ် ကိုကြီးတို့ အိမ်ထောင်ရေးကို မဖျက်ဆီးချင်ပါဘူး.ဒါကြောင့်ပါ။”
“တိတ်စမ်းနွယ်နီ တော်တော့ ဟာ နင်အခု ဟိုဘက်လှည့်စမ်း”
“ဘာ ဘာလုပ်မလို့လဲ ကိုစိုးဦး”
ပြောရင်းဆိုရင်းပဲ ကျွန်တော် သူ့ ကို အတင်းဟိုဘက်လှည့်ခိုင်းပြီးတော့ သူ့ဖင်ကို လီး အစိမ်းလိုက် ထိုးထည့်လိုက်တယ်။အညာသားဘဲကြီးနဲ့ လိုးတုန်းက ထွက်ခဲ့တဲ့ ဆောက်ရည်တွေနဲ့ ဆိုတော့အရမ်း ချွဲနေတယ်လေ။
“အ. အအ…မလုပ် နာနာ အားးးးးး”
“မလုပ်ပါနဲ့ နာတယ် အအအအ နာတယ်လို့ အား”
ကောင်မလေးက အော်တာနဲ့သူ့ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ လှမ်းပိတ်ပြီးတော့ အတင်းဆောင့်လိုးတယ်။ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကလည်း
“မှတ်ထားနွယ်နီ နင်တို့ မိန်းမတွေက လက်ဖက်တွေလိုပဲ ”
“ဘယ်လောက်ပဲ နှပ်ထားနှပ်ထား အဆာပလာ မပါရင် စားမကောင်းဘူး ”
“ငရုပ်သီးလေးလည်း ပါလိုက်ရသေး ကြက်သွန်ဖြူလေးလည်း ထည့်ပါမှ စားကောင်းတဲ့ ဟာမျိုးတွေ။”
“တွေ့လား နင့်ဖင်ပေါက်လေးကို ငါလိုးနေတာ။
“အဲ့ဒါကို ဖင်စိမ်းစားတယ်လို့ ခေါ်တယ်။မှတ်ထား ဆီမပါ ပျားမပါလိုးနည်းပဲ။”
“နင်တို့ မိန်းမတွေက ဒီလို မျိုးလက်ဖက်ကို မနှပ်ပဲ စားတက်တဲ့ သူတွေဆိုရင် သိပ်မုန်းကြတယ်လား”
ကျွန်တော်လည်း အငြှိုးတကြီးပြောရင်း လိုးရင်းနဲ့ ကောင်မလေး နို့ကိုညှစ်လိုက် ဖင်သားကြီးကို ညှစ်လိုက်နဲ့ လုပ်လိုက်တာ ကောင်မလေး အတင်းရုန်းတော့တာပေါ့။မရဘူးလေ ချုပ်ပြီးလိုးတာ ဆိုတော့ အရမ်းကို နာနေမှာသိတယ်။ဆောက်မြင်ကပ်လို့ ဒီတိုင်းကို လိုးပစ်လိုက်တာ။အချက် လေးဆယ်ကျော်တယ်။
နောက်တော့ တောင့်မခံနိုင်တော့ဘူးဗျာ။အရမ်းကောင်းလွန်းနေတာနဲ့ ကောင်မလေးကို ခါးကို သိုင်းဖက်ပြီး လရည်တွေကို သူ့ စအိုလေးထဲကို ပန်းထည့်ပစ်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးငို လိုက်တာဆိုတာကို ပြောမနေနဲ့တော့
ပြီးလည်းပြီးရော အပြင်ဘက်ကို ထွက်ပြေးသွားပါလေရောဗျာ။ဘဲကြီးဆီသွားတယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။စက်ရုံအပြင်ဘက်ကိုသွားတာ။ခေါင်းကြီးသွားတယ်။ဘယ်များသွားပါလိမ့်ပေါ့။.
မိန်းမပြန်လာတဲ့ အထိသူ ပြန်မလာဘူး.။သနားလည်း သနားတယ် ပြီးတော့ စိတ်လည်းပူတယ်၊ဟိုဘက်ခန်းက အညာသားကတော့ စော်လေးကို မသိမသာလေး လာချက်တယ်။ကျွန်တော်လည်း အလိုက်အထိုက်လေး နေတော့ သူလည်းမသိပါဘူး။မိန်းမကတော့ ပူတာပေါ့ ဖုန်းတွေဘာတွေဆက်တယ်။နောက် လေးရက်လောက်နေတော့ မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ပြီတဲ့။တစ်နှစ်လောက် သီလရှင်ဝတ်မယ်လို့ပြောတယ်တဲ့။ယောက်ျားလည်း မယူတော့ဘူးတဲ့။
မလေးရှားကနေ ဘာလို့ မပြောပဲ ပြန်ပြေးတာလဲလို့ မိန်းမက မေးတော့ ပျင်းလို့ တဲ့ မနေချင်နေတာ့လို့တဲ့ .ပြောပြီးပြန်ရင် ခွင့်မပြုမှာ စိုးလို့တဲ့ဗျာ။
သနားစရာလည်းကောင်းသလို စာနာမိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က ဒေါသနဲ့ လုပ်ခဲ့ ပြီးပြီ ဆိုတော့ မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
သူဘာလို့ ပြန်ပြေးသွားသလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်နဲ့ ကောင်မလေးပဲသိလောက်မယ်ဗျာ၊
ထားလိုက်ပါလေ။မလေးရှားက တစ်ခန်းရပ် ပြဇတ်လေးပေါ့။ဘဝဆိုတာက တစ်ယောက်အတွက် တစ်ယောက်က မှတ်တိုင်တွေလိုပါပဲ…တွေ့ဆုံကြုံကွဲပေါ့။
သူနှပ်ထားတဲ့ လက်ဖက်လေးကို ကျွန်တော် အဆာပလာမပါပဲ စားမိလိုက်တာကိုတော့ တစ်အုံ့နွေးနွေးဗျာ
မဟာနန်းမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်....MAHARNAN.COM ကို လေးစားဦးညွှတ်စွာ ခရတ်ဒစ်ပေးပါသည်ခင်ဗျာ။ Labels:
ကျောင်းသူကို ဒီလို မြိုင်အောင်လိုးတယ်။
၂၅ မိနစ် ကြာတဲ့ အကြည်(ဟုန်းမိတ်ဆိုတာကိုပြစမ်းသားကြ...
ဇတ်ကားရှည်ကြီးနော် ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကခိုးကြည့်ခ...
မလေးရှားမှာ ဆောက်ပြသနာတက်သွားတဲ့ ခရိုနီ
ဆိုက်တော့နည်းနည်းကြီးတယ် ကြည်တယ် ကောင်းတယ်။
နာမည်ကြီးနေတဲ့ အလှပိုင်ရှင် (ဇတ်ဝင်ခန်း)
ဒီကားကိုတော့ သိပြီးလောက်ပါပြီ (ဇတ်ဝင်ခန်း)
ဒီကားကတော့ လိင်တူ အနုစားလေးပါ (ဇတ်ဝင်ခန်း)
ဒီလိုကားကောင်းလေးတွေ အမြဲကြည့်ချင်ရင် မန်ဘာဝင်ထာြး...
1 MINUTE ONLY တဲ့
cobra ရုပ်နဲ့ ဘဲ
တစ် အအ နဲ့
ဈေးကြီးပေးရတဲ့ ဟုန်းမိတ်လိုးကား အာဆီယံသား
သူနာပြုမ လေးကို လိုးခြင်း
အာဆီယံ အလတ် ပေါင်တွင်းသား
ပန်ခမ်းအစည်းအဝေးမှာ NCA စာချုပ်ကို အစားထိုးဖို့ပြော
(ရတနာပုံ အဝေးသင် မြန်မာမူ့ ) ကောင်မလေးကိုစိတ်နာလို့ ပါတဲ့ ( ၂ )
Re: နေမထွက်တဲ့ နေ့ လမရှိတဲ့ ည